Biography of kimboi by seigin kuki - issuu
wik d;fjyn EfiSh fv rlsK ;dt wu Gft o u xfuqf;H kt rsK ;do m;a&;wm0eufk dau s¹ye Gp fm Gx r;faq mi ofnh f
rui;fbKdGif trsK;daumi;f ye;fwyiGhf
okd rh [w k f
published by : PUBLICITY & INFORM ATION DEPTT. OF THE KUKI STUDENTS DEMOCRATIC FRONT
Miss VAH NEI KIM@ Kimboi (Kuki) ၏ အတ္တုပတအ္တိ ကျဥ်း L.kuki: ခရာဇသ်က္ကရာဇ်
၂၀၀၄ခနုစှ်
ြ သဂ တုလ်(၆)ရက၊်သောကြာနေ့
အချနိတ်ငွ်
ကျွန်ေတာ တ်ခ့ျိုစ်ေသာ
လပုေ်ဖာက်ငို ဖ်က် ရေဲ မ မကင်းဘွုငိ(် အသက၂်၁)နစှသ်ည်သမူကဖို နဆ်င်းသော ဘရုားသခင၏်ခေါ်တောမ်ြူခင်းခခံသ့ဲ ဖြင့် သမူနှငဆ့် ကန်ယွေ်နသော မ ဘိေ ဆမျွုိးအသငိုးအဝငိုးများ၊ လပုေ်ဖာက်ငို ဖ်ကမ်ျားနငှ့် အတအူသမိတိေ်ဆသွငူယခ်ျင်း များ အားလုးံဝမ်းနည်းကြေကြွဲခင်းနှငအ့် တူ နှေမြာတသဖြစ်ြကရသည။် ထေ့ို ကြာငလ့် ည်းသက့ူို အောက်ေမသေ့ာအားဖြငသ့် မူ၏ အတ္ထုပိတ(္တိ ဝါ)သမူ၏ဘဝ တစေတ့စောငက့်ို အောကပ်ါ အ တငိုး အကျဥ်းချုံ့ ဖြော်ပလကို ရ်ပေသည။် ငယစ်ဥဘ်ဝ မကင်းဘွုိငသ်ည်ရ ကစ်၊ွဲ ၁၇၊၁၁၊၁၉၈၃ခနုစှ် (သောကြာနေ)့ တငွ် စစက်ငိုးတငိုး၊တမူးခရငို ၊် အမတှ(် ၁၂)မြို့မရပက်ကွ၊် နန်းဖါလရွုာံတငွ် အဖဦးဇမခ်တို လီ(် Jamkhotil) နငှ့် အမေိဒ်ါနမိတ်င(် Neitin)တမ့ို ဖွှားမြငခ်ပဲ့ါသည။် မေွးချင်းညအီစက်ို မောငန်မှ(၆) ယောကရ်သှိ ညအ့် နက် အကြီးဆုးံသမီးဦးပင်ြဖစသ်ည။် ငယစ်ဥမ်စ ၍ သကသ်တလ်တွ် ကသိုာစားတတ်လေရ့သှိ ညထ့်ူး ခြား သောအဂါင်္ရပန်ငှအ့် တူ ကြီးပြင်းလာခသ့ဲ လူည်းဖြစသ်ည။် ကျောင်းသူဘဝနငှ့် တောလ်နှေ်ရးတငွ် ပါဝငပ်တသ်က်လာခြင်း မ-ကင်းဘွုငိသ်ည် ခရစသ်ကရ္ကာဇ် ၁၉၉၀ ခနုစှတ်ငွ် သေူန ထငို သ်ည့် နနဖ်ါ လရွုာံ၌ပင် အခြေခပံညာ မလူတန်းကျောင်းကို သင်ယြူပီးမြောကခ်သ့ဲ ည။် မလူတန်းကျောင်းသဘူဝ တငွ် အတန်းတငို ၌်ပ ထမ ( သမ့ို ဟတု)် ဒတုယိအ ဆင က့် သိုာဆတွခ်ူး နငို ခ်ေ့ဲ သာကြောင့် ငယစ်ဥမ်စှ၍ မဘိများမှ သတူ၏့ို လလိုားချကမ်ျားကို အကောငအ်ထညေ် ဖာန်ငို မ်ည့် သအူဖြစ် မျောလ်ငခ့်ြဲ့ကသည။် ကျောင်းစာတငွသ်ာမကဘဲ ဘာသာရေး၌ မေေ့ွှ လျှာခ်သ့ဲူဖြစ်ေသာကြောငင့် ယစ်ဥက်ပင် Sunday School၌ ဂဏုေ်တာက်ို ချီးမမွ်းခြင်း၊ကျမ်းစာရတွဆ်ြိုခင်း စသညတ်တ့ို ငွ် အ လနွပ်ငစ်တိအ်ားထကသ်နခ့်ဲလေသည။် ထေ့ို ကြာငလ့် ည်း ဘာသာရေးနငှ့် ပတသ်ကသ်ညြ့်ပငို ပ်တွဲ ငိုးတငွ် ဆတုဆံပိမ်ျားစွာ ဆတွခ်ူးခရ့ဲာရပရ်ွာအတငွ်းရပမ်ရိပဖ်များ၏ ဂဏြုပု
ချီးမမွ်းခြင်းနငှအ့် လေး ပေးခြင်း ခရံသတူစဦ်းလည်းဖြစပ်ါသည။် ၁၉၉၃-၉၄ ပညာသငန်စှမ်စှ၍ တမူးခရငိုအစိးုရအထကတ်န်းကျောင်းတငွ် အ လယတ်န်းနငှ့်အထကတ်န်းပညာ များကသို ငယ်ခူေ့ဲ လသည။် ထိုကာလများတငွ် အတန်းတငိုး၌အဆငြ့်မငြ့်မင့် အောင်ြမငခ်သ့ဲ ညအ့် ပြင် ကျောင်းတငွက်ျင်းပ သောအားကစားပမျွဲားနငှ့် အခြားပျောပ်ရွဲ ငွှပ်မျွဲားတငွ် ထူးချွနခ်ေ့ဲ သာကြောငလ့် ည်း လချူစလ်ခူင်ေပါများပြီး အပေါင်းသင်း ဝငဆ်န့် သလူည်း ဖြစခ်သ့ဲ ည။် ဤသြို့ဖင့် မကင်းဘွိုငသ်ည်သငူယတ်န်းမစှ၍ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခနုစှတ်ငွ် ဒဿမ တန်း(၁၀)တန်းအထိ အ ထစေ် င့ါ မရဘှိဲတနစှတ်စတ်န်း အဆငြ့်မငြ့်မင့် အောင်ြမငန်င်ို ခ်ေ့ဲ သာကြောင့် အောငပ်န်းအလလီ ဆတွခ်ူးနိုငခ်သ့ဲ ည။် သမူသည အ်လနွရ်ညမ်နှ်းချက်ြကီးမားခသ့ဲြူဖစခ်သ့ဲ ည။် သေ့ို သာလ်ည်းဤမျှ ရညမ်နှ်းချက်ြကီးမားသညသ့် သူည်(၁၀)တန်း ပညာကိုသငယ်ေူနစဉ် မမျောလ်ငဘ့်ဲကြံကမ္မာသည် သမူအားမျကန်ှာသာ မပေးခသ့ဲ ညအ့် ဖြစတ်ခအုားကြုေံတခ့ွ ရ့ဲ သည။် အ ဘယေ့် ကြာငဆ့်ေို သာ် မကင်းဘွုိငသ်ည်ဆယတ်န်းပညာကို ဆည်းပူး နေစဥ၌်ပင် ရတုတ်ရက် ကျန်းမာရေးချုိ့တဲ့ လာ ကာ င ကှဖ်ျားအေူရာငင်န်းဖျား၊အစာအမိေ်ရာဂါနငှ့် မနိ်းကလေးတ၏့ို သဘာဝအရကြုေံတတ့ွ တ်ေသာ ရောဂါများ ကြောငမ့် ကြာခဏဖျားနာခရ့ဲာထနို စှ် တနစှလ်ုးံတငွ် သမူသည် ၆၀% ပင်ေကျာင်းချနိမ်ပြညခ့် သ့ဲ ညက်ို တေရ့ွ သည။် သ၏ူကျောင်းချနိပ်ျကက်ကွမ်ှြေု ကာ င စ့်ာမေးပပွဲ ငေ်ြ ဖ ဆခို ငွ့် သည။်ကျူရငှက်သိုာ
မရှေိ သာလ်ည်း ဤခေတ်ြကီးတငွ်
နားလညမ်ြှုဖငဆ့် ယတ်န်း မညသ်ညက့်ျူရငှက်မျှို
စာမေးပကွဲေို ဖြဆခို့ဲ
တက်ေရာက်ြခင်းမရဘှိဲ
အ လတွေ်ြ ဖ ဆခိုြဲ့ခင်းဖြစသ်ည။် ထကို သ့ဲ့ို ပြုလပြုခင်းမှာလည်း သမူအနေနငှေ့် နာကန်စှတ်ငွ် အမတှမ်ျားများဖြင့် အောင်ြမင် နငို ရ်နစ်ာမေးပအွဲ တေအ့ွ ကြုံ
ရရရှိ နဟ်ေူသာ ရ ည ရ်ယွု ခ်ျ ကသ်ကသ်က်ြဖင့်
ဖြေဆခိုြဲ့ခင်းပင်ြဖစသ်ည။်
ထနို စှစ်ာမေးပွဲ
အောငစ်ာရင်း ဖငွေ့် သာအခါ သေူမျှာလ်ငထ့် င်ြမငခ်သ့ဲ ညအ့် တငိုးရှုံးနမိခ့်ေဲ့ လသည။် ထသိုြို့ဖစမ်ညက်ို နကယို က်တည်းက ထင်ြမငယ်ဆူခဲ့
ပြီးဖြစရ်ာ သမူအနေဖြင့်
အြံ့သခြင်းမရှိခေ့ဲ ပ။သရ့ိုာတငွ်
ထစိုာမေးပကွဲို
ဖြေဆြိုခင်းအားဖြငသ့် မူသည်
စစအ်စိးုရ၏ ဖောက်ြပန် သောပညာရေးစနစက်သိုြိမငလ်ာခ သ့ဲ ညန်ငှအ့် ညီ ထအို ဖြစ်ေကြာငလ့် ည်း သမူသည စ်စအ်စိးုရ၏ ပညာရေးအပေါ်အော့
နလှုးံနာလောက်ေအာင် ရွှံရှာမနုးတီးလာခရ့ဲ င်း ဤနင်ို င်၌ံဆ ကလ်က် ပ ညာဆကလ်က် သင လ်စို တိ်
ပငက်ုန ခ်န်းခေ့ဲ လသည။် အကြောင်းမှာ သူ့မအနေဖြင့် မဘိနငှတ့် န်းတထူားပြီး ကြညည်ုလိာခေဲ့ သာ ဆရာ-ဆရာမများ သည်ဆယတ်န်း စာမေး ပွေဲ မးခနွ်းများကို ငေရွငှ် ကြေးရငှ် သားသမီးများထံ သက္ခိါမစ့ွဲာရောင်းချသည့် ကစိပ္စ င်ြဖစသ်ည။် ထအို ဖြစ်သည် နငို င်အံတငွ်း လတူန်းစားခြွဲခားမကိူု များစွာ အားပေးသညအ့် ပြင် စာမညမ်ျှ တောေ်စကာမူ ငွေေကြးမရသှိူဆင်းရသဲားများသည် ကျောင်းပငမ်မြငဖ်ူးသည့် လချူမ်းသာများထက် အကျအဆုးံ များပြားလာခေ့ဲ လသည။် ထအို ဖြစ် များသညပ်င် နကယို က်ြ ကရံယွထ်ားသော သ၏ူရ ညမ်နှ်းချကမ်ျားကို ပျောကပ်ျ က်ေစရမျှုံ မကဘဲ ဤစစအ်စိးုရ၏ ပညာရေးစနစအ်ပေါ်နာကျည်းလျက် ထမျှိုဖောက်ြပနသ်ည့် ပညာရေးစနစက်ဆို နက့်ျငတ်ကို ခ်ကို လ်စို တိ် တဖွားဖွားပေါ် ပေါက် လာခြဲ့ခင်းဖြစသ်ည။် ထအို ချကသ်ညပ်င် သမူအားတော လ်နှေ်ရးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ တနွ်းပေ့ို စသည့် အဓကိအချက်ြဖစ်
လာ ခ ရ့ဲ သည။်
ထမျှိုဖောက်ြပန်ေသာ
စစအ်စိးုရ၏
ပညာရေးစနစသ်ညပ်ငလ်ျင်
သမူ၏
သဘောထားကြီးမ၊ူ အများပြညသ်အူတကွ် စနွလ့် တွ် အနစှန်ာခရံင်း ပေးဆပလ်သို ညစ့် တိဓ်ါ တန်ငှ့် သမူ၏ မျုိးချစ် စတိဓ်ါ တက်ို မီးမောင်း ထိးုပြ ခသ့ဲ လို အခြားတဖကမ်ှာလည်း အမနှတ်ရားအတကွ် အ သကက်ပို င် ပဓါနမထားဘဲ အသေခံတော လ်နှလ်သို ည့်
သမူ၏ပြောငေ်ြ မာက်ေသာ သတက္တို
အပြောသကသ်ကမ်ဟတုဘ်ဲ
လက်ေတသ့ွ က်ေသပြရမည့်
အခငွအ့်ားရယလူကိုြ်ခင်းပင် ဖြစသ်ည။်
ဒက္ခုသည်အမညခ်ံ တောလ်န်ှရေးသမား - မကင်းဘွုငိ် မကင်းဘွုငိသ်ည်သမူ၏ လကင်င်းခစာံးနေရသော အခြေအနေမအှဆင့် တဆကတ်ည်းပင် မြနမ်ာစစအ်စိးုရ၏ အပုခ်ျုပ် မေူအာကတ်ငွ် ချတြွ်ခုကျံနေသော စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများအပြင် နေစ့  ဥန်ငှအ့် မျှ အာဏာပငိုတက့ိုို အလပုေ်ကျွး ပြုစရုသည အ့် ကြားမှ မထင်ရငမ်ထင သ်လို ရကစ်ကစ်ွာ အနငို က်ျငေ့် စာက်ားသည့် စစအ်စိးုရကို များစွာ စ ကဆ်ပုမ်ခိေ့ဲ လသည။် ထေ့ို ကြာငလ့် ည်း သမူသ ည်သ က္ကရာဇ ၂်၀၀၁ ခနုစှ် ဇလူငို လ်တငွက်ျငပ်ခသ့ဲ ည့် KSDF ၏ စ တတုအ္ထြ ကမိ် ညလီာခ သံို့ တက်ေရာကရ်င်း သသူလိေို သာ အချကမ်ျားကို တင်ြပကာ အပြနအ်လနှေ်ဆွးနေွးခြဲ့ကသည။်
ေ နာကဆ်ုးံ၌ သမူသည် စစအ်စိးုရ၏ အနစှသ်ာရကင်းမေ့ဲ သာ အတန်းပညာကို ဆကလ်ကသ်ငယ်မူညအ့် စား နငို င်အံတငွ်း တငွ် ဒမီကို ရေစစီနစထ်နွ်းကားရေး၊ လမျူုိးတငိုးတငွ် တညူေီသာ အ ခ ငွအ့် ရေးကယို စ်ပီငို ဆ်ငိုေ် ရးနငှ့် စစအ်စိးုရပြုတက်ျရေး အ တကွ် အဆုးံစနွတ်ကို ပ်ဝွဲ ငရ်န်သဓံဌိာနခ်ျမတှလ်ျ က် ထညို လီာခ အံပြီးတငွ် KSDF အဖဝ့ွဲ င် ဖြစလ်ာခေဲ့ လသည။်အဖဝ့ွဲ င် ဖြစလ်ာ ကာ တချနိတ်ည်းတငွလ်ည်း (KWHRO)အဖဝ့ွဲ င်ြဖစလ်ာခေဲ့ လသည။် KSDF အဖဝ့ွဲ င်ြဖစလ်ာပြီးနောက် အဖေ့ွဲ ခါင်းဆော င မ်ျားသည် မကင်းဘွုငိ၏်စတိအ်ားထကသ်နမ်၊ူ နိးုကြားတက်ြကမွ၊ှု ရိးုသားမစူသည့် ကောင်းမြတသ်ည့် ပငက်ယိုအရည်းအချင်းတက့ိို
အနီးကပသ်ရိလှိာခသ့ဲ ည။် အကယ၍်သမူကေို ကာင်းမနွစ်ွာ ပြုစပျုိးထောငပ်ါက အနာဂါတတ်ငွ်
ကကူီးလမျူုိးများအတကွ် အားထားရမည့်ပဂ္ဂုလိ(် သမ့ို ဟတု)် ခေါင်းဆောင် တစ်ေယာက်ြဖစလ်ာန ငို သ်ည်ဟေူသာအမျုိး သားရေးရညမ်နှ်း ချကက်ဥိုီးတညရ်င်း မကင်းဘွိုငအ်ား ဒေလီမြုိ့သို့အခြေချနငို ရ်န် KSDFသည် KWHRO နငှတ့် ငို ပ်ငရ်ာ ထအို ဖန့ွဲ စှဖ်၏့ွဲ သဘောတဆူုးံဖြတခ်ျက်ြဖင့် သကရ္ကာဇ်၂ ၀ ၀ ၁ ဇ လူငို လ်တငွ် ဒေလြီမသ့ို့ို ရောကရ်လှိာခေ့ဲ လ သည။် မ-ကင်းဘွိုင်သည်ေဒလြီမို့ရှိ ကမ္ဘာက့လုသမ ဂ ဒ္ဂကုသ္ခ ညမ်ျား ဆငို ရ်ာမဟာမင်းကြီးရုးံ(UNHCR)၌နငို င်ေံရးခလို ခှုံ ငွေ့် လျှာက် ထားခရ့ဲာရကစ်၂ွဲ ၀၊၁၂၊၂၀၀၁နေတ့  ငွ်(UNHCR)သည် သမူအားတေဆ့ွေုံ မးမြန်းခရ့ဲာသ၏ူဖြူစငရ်ိးုသားမှေုကြာင့် ရကစ်ွဲ ၂၁၊၁၊၂၀၀၂နေတ့  ငွ် နယူးဒေလအီခြေစကို(UNHCR)မှ နငို င်ေံရးဒကုသ္ခ ညအ်ဖြစ်ြပုခြင်းခခံရ့ဲာသမူ၏ ကဒ န်ပါံတမ်ှာBU747 ဖြစသ်ည။် ထအို ချနိမ်စှပြီး မကင်းဘွုိငသ်ည်ေ ဒ လ၌ီကျင်းပသော အခမ်းအနားများ၊ ဆန္ဒြပပမျွဲား၊ Seminar- Workshop အပါဝင် နငို င်ေံရးသငတ်န်းများတငွ် KSDF နငှ့် KWHRO စသည့် အဖအ့ွဲ စည်းများကို ကိုယစ်ားပြုလျှက် တက်ြကစွာ ပါဝငလ်ုပ ရ်ှား လာခေ့ဲ လသည။်
သမူ၏ ဒမီိုကရေစအီရေး လှုပရ်ှားမမျူား မကင်းဘွိုငသ်ည် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၁ မှစ၍ ၂၀၀၄ ခနုစှ်ြ သဂ တုလ်( မ ကယွလ်နွမ်ီ) အ ထိမ ခိငအ်ဖအ့ွဲ စည်း KSDF ကို ကယို စ်ားပြုလျက် ဒမီကို ရေစအီငအ်ားစမျုားမှ တနငို င်လံုးံ အတငိုးအတာဖြင့် ကျင်းပခသ့ဲ ည့် နငို င်ေံရးအခမ်းအနားနငှ့် ဆန္ဒြပပမျွဲားအကြမိေ်ပါင်း(၅၀)ကျောန်ငှ့်
အဖွဲ့စည်းတစခ်ြုခင်းစမှီ
နစှပ်တလ်ည်ေနအ့  ခမ်းအနားပေါင်း(၄၀)ကျောတ်အ့ိုား
နငို င်ေံရးအခမ်းအနားများ၊ညလီာ ခံန ငှ့်
တက်ေရာကခ်ေ့ဲ လသည။်
ထမျှိုသာမကဘဲ
ေ တာ လ်နှသ်မျူား
အ တငွ်း (Capacity Building) ဟေုခါ်ေ သာက နွပ်ျူတာနငှ့် အဂလ င်္ ပိ် စကားပြော သငတ်န်းများကလို ည်းတက်ေရာက် ခ ရ့ဲ င် အ သပိညာ တိးုတကရ်န် စမွ်းရည်ြမငှတ့် ငခ်ေ့ဲ လသည။် ထအ့ို ပြင် မကင်းဘွုိငသ်ည်ေ ဒ လီ တငွအ်ခြေချနေထငို သ်ည(၂)့် နစှေ်ကျာ်ကာလ အ တ ငွ်း Seminar,Workshop များကို အကြမိ(် ၃၀)ထကမ်နည်းတက်ေရာကခ်သ့ဲ ညအ့် ပြင် လေလ့ာေ ရးခရီးစဥမ်ျားကပိုါအခါအခငွသ့် ငတ့် ငိုး လကို ပ်ါခဲ့လေသည။် သမူအနေဖြင့် နောကဆ်ုးံလိုကပ်ါသွားခသ့ဲ ည့်Exposure tripမှာ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၄ခနုစှ၌်အနိယ္ဒိ နငို င်(ံ Mumbai)တငွ် ကျင်းပခေ့ဲ သာ World Social Forum ပင်ြဖစသ်ည။် သသူည်
ဆန္ဒြပပမျွဲား၊
နငို င်ေံရအခမ်းအနားများ၊
သာမကဘဲဘရုားဝတ်ြပုပမျွဲားတငွ်
သတမ်တှထ်ားေ သာအ ချိန တ်ငိုးအတအိကျ လကို န်ာကျင်သ့ုးံခဲ့လေသည။် အချနိက်ိုတနဘ်ိးုထားလေးစားသည့် သမူသည်မညသ်ညအ့် ခမ်းအနားတငွမ်ဆို နောကက်ျ၍သွားတတသ်ည့် အလေအ့ထမရသှိ ညမ်ှာ အဖဝ့ွဲ ငအ်ားလုးံအတကွ် အ တယု စရာပင်ြဖစသ်ည။်
သမူ၏နငို င်ေံရးနိးုကြားမ၊ှုအချနိက်ေို လးစားမှု
စတိအ်ားထကတ်နတ်က်ြကမွတှုေ့ို ကြာငပ့် င်
သမူမှာ
ဒမီကို ရေစအီငအ်ားစအုားလုးံနငှ့် သကဆ်ငိုေ် သာ လပုင်န်းစဥမ်ျား ဖောေ်ဆာ င ရ်ာ တငွ် ပမို အို ဆင်ေပြစေရန် ရညရ်ယွ် ဖစ့ွဲ ည်းခသ့ဲ ည့် Joint Action Committee(JAC)တငွ် ရေွးချယ်ြခင်းခခံရ့ဲ သည်။ ထအို ဖြစသ်ညပ်ငလ်ျှင် သမူ၏ပြညဝ့် သောတော လ်နှေ်ရး စတိဓ်ာ တက်ေို ပါလငွေ်စသည။်ထမျှိုမကဘဲ
အကြမ်းမဖကလ်ပှုရ်ှားမမျှုားကို
ကျငသ့်ုးံရင်း
စစအ်စိးုရကို
ေ တာ လ်နှသ်ည့် Committee for Nonviolence Action in Burma(CNAB) တငွK်SDF ကိုယ်စား၊ Women League of Burma(WLB) မြနမ်ာနငို င်အံမျုိးသမီးများအဖခ့ျွဲုပတ်ငွ် ကကူီးအမျိုးသမီးအဖက့ွဲ ကိုိုယစ်ားပြုရင်း တပ်ေပါင်းစု လပုင်န်းများ တငွတ်က်ြကစွာပါဝငခ်ေ့ဲ လသည။်
ကကူီးအမျုိးသားရေးအတကွ် ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား
ကကီူးကျောင်းသားများ ဒမီကို ရကတ်စ်တပ ဉ်ီးသည် နယခ်ျဲ့အဂလ င်္ ပိလ်က်ေအာကသ့်ို ကျရောကသ်ည့် အချနိမ်စှ၍ ယေ န ထ့ိေ ခ တအ်ဆကဆ်က် တတ့ို ငွ် အမျုိးသားရပငို ခ်ငွ့် ကင်းမဆ့ဲ တိသ်နုးသည့် ကကူီးလူမျုိးများအား အနာဂါတ် မြနမ်ာ နငို င်တာံ၏်ဒမီကို ရေစီ အပုခ်ျုပမ်ူ စနစ်ေအာကတ်ငွ် မမိတိ၏့ို အမျုိးသားရပငို ခ်ငွ့် အပြညအ့် ဝရရှေိ ရးအတကွ် ဒမီကို ရေစီ နငှ့် အမျုိးသားရေးကို
ဆကစ်ပရ်င်း တကိုပဝွဲ ငသ်ည့် အဖပ့ွဲ င်ြဖစသ်ည။် ထေ့ို ကြာငလ့် ည်း ကကီူးကျောင်းသားများ
ဒမီကို ရကတ်စတ်ပဉ်ီးသည် ကကူီးလမျူုိးများ၏ အမျုိးသားရပငို ခ်ငွ့် အပြညအ့် ဝ ရရနှိ ငိုေ် ရးအတကွ် အကြမ်းမဖက်ေသာ နည်းဖြငတ့် ကို ပ်ဝွဲ ငရ်ာ တငွ် ကူကီးလမျူုိးများ၏ ရပငို ခ်ငွက့်ို ပတိပ်ငဟ်နတ့်ားစေသည့် အရာများကရှိုာဖေသွညန်ငှအ့် မျှ ထို အမျုိးသားရေးကို နှောငေ့် နှးစေသည့် အပြငရ်နသ်ူ အ တငွ်းရနသ်တူအ့ို ပြင် တနငို င်လံုးံ၏ ဘအုံ ကျုိးစီးပွားကို ထခိကိုေ် စ သည့် ပကတအိခြေအနေမနှက်ို သရိလှိာခေ့ဲ လသည။် ထနို ည်းတြူမနမ်ာနငို င်တံငွ် စစအ်စိးုရပြုတက်ျသည့် တငိုေ် အာင် ကကူီးလမျူုိးများသည် လမျူုိးစုအချင်းချင်းကြား အခငွအ့် ရေညမျှီမမှုရမှိ ချင်း ကကူီးတောလ်ှ န်ေရးကို ဆကလ်က် ဆငန် ရွဲ မည် ဖြစ်ေကြာင်းအတေအ့ွ ကြုနံငှယ့် ဥြှ်ပီး သရိလှိာကြသညန်ငှအ့် မျှ မမိတို့ ကကူီးပြည်သမျူား အ တငွ်းတငွ် ကျ စ လ်စခ်ငိုမာသော စည်းလညုံ ညီတွမ်ကှို တည်ေဆာ ကရ်မည်ြဖစရ်ာ ထအို တငွ်းအငအ်ား စ စုည်းရန် အတားအဆီးမနှသ်မျှကို ဖယ် ရှားရနမ်ှာလည်း အလနွပ်ငလ်ိုအပလ်ှေပသည။် ထေို ကြာငလ့် ည်း ရေဲမ-ကင်းဘွိုငသ်ည်KSDF အဖဝ့ွဲ ငအ်ဖြစ် တောလ်နှ် ရေးနယ်ေမြသို့ ရောကရ်သှိ ညန်ငှတ့် ပြိုငန်ကှ် KSDF၏ နငို င်ေံရးခယံချူ ကက်ို စစွဲြွဲမြဲမလဲကယံ္ခြုံကည် လျက် ကကူီးလမျူုိးများ အ တငွ်းရှိ
ဘာ သာရေး
ဂဏို ဂ်ဏခ၊ွဲ
ေ ဆမျွုိးစစုမျွဲားကို
ဖ ယရ်ှားရန်
ရတွရ်တွခ်ျွခွံျံ
ဆောငရ်ကွလ်ာခေဲ့ လသည။်
သမူနငှေ့် သွးသားအရ မကင်းရငှ်းသညေ့် ဆမျွုိးစမျုားမှ သမူအပေါ်အရေးပေးဆကဆ်မံမျှုားြ ပုလပုသ်ညက်ပို ငအ်တတန်ငိုဆုးံရှောငရ်ှားရမျှုံမက အချုိ့အားအမျုိးသားစည်းလုံးညညီတွမ်ကှုို ပျက်ြပားစေသညဟ်ေူသာ ခ ငို လ်သုံ ညအ့် ကြောင်းပြချက် ဖြငြ့်ပစတ်င်ေဝဖနခ်ေ့ဲ လသည။်ဤသြို့ဖငမ့် ကင်းဘွုိငသ်ည် မြနမ်ာနငို င်တံငွဒ်ီမ ကို ရေစစီနစ် ထနွ်းကားရနအ်တကွ် တကြ် ကွ စွာလပှုရ်ှားခသ့ဲ ညသ်ာ မ ကဘဲ ထဒို မီကို ရေစနီငို င်အံတငွ်း စစမ်နှေ်သာတရားမျှသမှု ရရနှိ ငိုေ် ရးအတကွလ်ည်း ကယို စ်မွ်း ဉာဏစ်မွ်းရသှိ လောက် ကြိးုစားရင်း ရနုးကနတ်ကို ပ်ွဝဲငခ်ေ့ဲ လသည။် မကင်းဘွိုငသ်ညအ်မျုိးသားရေးနငှ့် ပတသ်က်ြပီး သရိချှိကမ်နှသ်မျှကို ပြညသ်လူထူထုသံို့ တိုကရ်ကို အ်ားဖြင့း်၎င်း၊ စာပေးစာယနူည်းဖြင၎င့်း် ၊လထူစုည်းရုးံရေးလပုင်န်းစဥမ်ျားနငှလ့် ထူပုညာပေးခြင်းလပုင်န်းများကို တတန်ငို သ်ေ လာ ကလ်ပ်ုဆော င ခ်ေ့ဲ လသည။်ထနို ည်းတကူကူီးပြညသ်မျူားအပေါ်စစအ်စိးုရ၏ လအ့ူ ခငွအ့် ရေးချုိ့ဖောကမ်မျှုားကို နငို င်တံကာ မှသရှိ လာစေရန် စိတအ်ားထကသ်န်စွာ လပုေ်ဆာ င ခ့်ဲလေသည။် အထူးသဖြင့် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၂ ခနုစှတ်ငွ် KSDF မှ အကောင်း အ ထညေ် ဖ်ါဆောငရ်ကွခ်ေ့ဲ သာ ပြညတ်ငွ်းလပှုရ်ှားမသှုည်သမူ၏အမျုိးသားရေး စတိဓ်ါ တက်ို ပေါ်လငွထ်ငရ်ှား စေခသ့ဲ ည။် ထလို ပုရ်ှားမကှုာလမှာ ၂၀၀၂ခနုစှဒ်ဇီငဘ်ာ လမ ၂ှ၀၀၃ခနုစှဇ်နန်ဝါရလီများအထပိင်ြဖစသ်ည။် ထကိုာလအတငွ်း ကင်းဘွိုင် သည်ေြ ကာ ကရ့်ွံတနုလ်ပြှုခင်းကင်းမစ့ွဲာ သမူကယို တ်ငိုပြညတ်ငွ်းသို့ တတိတ်ဆတိဝ်င် ရောက်ြပီးနယစ်ပ် တစ်ေလျှာကရ်ှိ ကကူီးရွာပေါင်း(၁၀)ရွာကျောအ်ား
သွားရောကစ်ည်းရုးံနငို ခ်သ့ဲ ညအ့် ပြင်
သမူသွားနငို သ်ည့်
ရွာများအတကွ်
Seminer တစခ်ကို ကျင်းပခေ့ဲ သးကြောင်းသရိရှိ သည။် ဆကလ်က်ြပီး၂၀၀၄ခနုစှ် ဇနွလ်တငွက်ျင်းပပြုလပုခ်ေ့ဲ သာKSDF၏ ပဥမ္စ အြ ကမိေ်မြာကည်လီာခ ကုိံ အနိယ္ဒိ မြနမ်ာ န ယစ်ပ် မိးုလေးမြတ့ို ငွက်ျင်းပရနအ်ဖဝ့ွဲ ငအ်များစမှုာ နယစ်ပသ်ေ့ို ရာကရ်ခှိြဲ့က သည။် ထသို န့ို ယစ်ပ်ေရာက်ေနဥတ်ငွပ်င် သမူသည အ်ားလပရ်ကမ်ျားကို အလဟဿ မဖြစ်ေစဘဲ အမျုိးသားရေးအကျုိး စီးပွားအတကွ် အသုးံပြုလျက် နီးစပသ်ည့် ကကူီးရွာများသို့ သွားရောကစ်ည်းရုးံခေ့ဲ လသည။် သမူ၏ကျုိးစားမစှုတိအ်ား ထကသ်နမ်တှုေ့ို ကြာင့် ထညို လီာခ တံငွပ်င် KSDFအဖ၏့ွဲ ဘဏ္ဍာရေးတာဝနခ်အံဖြစ်ေရွးချယ်ြခင်း ခခံရ့ဲ သည။် ထမျှိုသာမကဘဲ နယူးဒေလ၊ီ အန္ဒိယနငို င်သာံးခယံသူည့် ကကူီးအရာရြှိကီးငယမ်ျားနငှ့် တကသ္ကလိုေ် ကာ လပိ် အသီးသီးတငွပ်ညာသင ယ်ြူက သည့် ကကူီးလမျူုိးများ၏ထောကခ်မှုံ ရရနှိ ငို ရ်နလ်ည်း အဖမ့ွှဲေ ပးသော တာဝနမ်ျားကို ကျေပြနွစ်ွာ ထမ်းဆောငခ်ေ့ဲ လသည။် ပြညတ်ငွ်းလပုင်န်းများအတကွ် တစ အ်မိဝ်ငတ်စအ်မိတ်က် ရ ပံေုံ ငရွှာဖေရွာ တငွလ်ည်း ရှေ့ဆုးံမပှါဝငခ်သ့ဲ ည။် KSDFမအှပ တစ်ဉ် တနလာင်္နေတ့  ငိုးကျင်းပသည့် နငို င်ေံရးဆေွးနေွးပွဲတငွလ်ည်း တကြိမတ်ခါမျှပင် မပျကက်ကွခ်ေ့ဲ ပ။ သမူသည်ေ တာ လ်နှေ်ရးအတက်ွခြေ စ ပုံ စ် ဝင်ေရာကလ်ာ သပူပီ UNHCRမှ သမူကေို ထာကပ်သ့ံ ည့် လစာ Rs1400ကပို င် မညသ်ညအ့် ချနိက်မျှတစက်ယိုေ် တာေ် ကာင်းစားရေးအတကွ် အသုးံမပြုပဲ အဖက့ွဲ အို ပန်ှေံ လရ့သှိ ည။် အဖစ့ွဲ ည်းအနေဖြငလ့် ည်း သမူ၏စနွလ့် တွမ်ကှုိုအသအိမတြှ်ပုသညအ့် နေဖြင့် သ၏ူလအို ပခ်ျ ကမ်ျားကို ဖြညစ့် ကွေ်ပးခြဲ့က
သည။် ထကို သ့ဲေို့ ပးဆပ်ေစ ကာ မူသမူတင်ွမောကမ်ာဝငြ့်ကွားခြင်းမရှေိ ချ။ မ-ကင်းဘွုိင၌်ထူးခြားချကတ်ခမှုာ အခမ်းအနားများတငွ် သ ဝဏလ်ွှာ၊ ထတြုပန်ေကြညာချကန်ငှ့် စာတမ်းများ ဖတ်ြကားရာ တငွအ်ကြောင်းအရာ၊အရေးအသား အသုးံအနှုန်းများ အတတူပူင်ြဖစ်စေကာမူ အခြားသမျူားထက် ပရသိတ် များကို
ဆွေဲ ဆာငန်ငို စ်မွ်းရြှိခင်းပင်ြဖစသ်ည။်
နားလညသ်ေ ဘာ
ေ ပါက်ေစ လေို သာ
ဤသြို့ဖစရ်ခြင်းမှာ
စာဖတရ်ာ တငွ်
သ၏ူေ စ သနာေြ ကာ င ပ့် င်ြဖစသ်ည။်
နားထောငသ်မျူားကောင်းမနွစ်ွာ
ထေို စသနာအလျှောက်
သသူညအ်များ၏
ချီးကျူးဂဏြုပုခြင်းကို မကြာခဏခခံရ့ဲ သည။်ထို့ကြောငလ့် ည်းသသူည် အဖ၏့ွဲ တာဝန်ြဖင့် ဒေလ၌ီေ န ထငို ခ်သ့ဲ ည့် ကာလ တစေ် လျှာက်လုးံတငွ် အဖမ့ွဲြှကီးမှုးကျင်းပသော နငို င်ေံရးအခမ်းအနားများတငွ် အများအားဖြင့် အခမ်းအနားမှုးအဖြစ်ဆော င ရ်ကွေ်လရ့သှိ ည။်
တန ငို င်လံုးံနငှဆ့် ငိုေ် သာ
အခမ်းအနားများတငွပ်င်
အ လတွမ်ပေးဘဲ
ရေွးချယ်ြကသည။် သ၏ူသငူယခ်ျင်းများသည် တောလ်နှေ်ရးလမ်းကြောင်းကို သေဖွရီင်းသတိယနငို င်သံို့ ရောကရ်နှိ ငိုေ် ရး အ တကွ် အ ပြ ငို အ်ဆငို လ်ယှု က်ေနချနိတ်ငွသ်သူည်သ၏ူယြုံကညခ်ျက်ြဖစသ်ည့် တောလ်နှေ်ရးအား အခြားမညသ်ည့် အရာနငှမ့်ျှ အပေးအယြူပုလပြုခင်းမရခှိ သ့ဲ ညမ်ှာ သ မူ၏မျှောလ်ငခ့်ျက်ြကီးမားမ၊ှုစတိထ်ားမြငြ့်မတမ်နှုငှ့် ကယို က်ျုိးစနွသ့် ည့် ကောင်းမြတ် သည့် အစဥအ်လာများအား နောငလ်ာနောကသ်ားများအတကွ် စြံပအတယုစူရာအဖြစ် အမေအွနှစေ် ကာင်း များကချိုနရ်စခ်ြဲ့ခင်းပင်ြဖစသ်ည။် ပထုစုဥလ်သူားများအနေဖြင့် အချနိတ်နအ်ရယွေ်ရာကသ်တူငိုးသည် နလှုးံသားရေးရာနငှ့် ပ တသ်ကဆ်ကန်ယွတ်တ်ြက သညမ်ှာ ဓမတ္မာပင်ြဖစသ်ည။် သြို့ဖစ၍်သာ မ န လ်မျှူသာဖြစ်ေသာ Kimboiသညလ်ည်း အခြားသမျူားနည်းတူ
ခစာံးတတသ်ညန့် လှုးံသားရမှိ ညသ်ာဖြစသ်ည။်
ထနို ည်းတူ
အခြေခအာံးဖြငရ့်ိးုသားဖြူစငသ်ည့်
အပြင် အဖကဖ်ကအ်ပြစဆ်စို ရာပငမ်ရသှိ ည့် ကင်းဘွုိငအ်ားလပျူုေိယာ ကက်ျာင်္းများမှာ စတိဝ်ငစ်ားကြသည့် အဖြစမ်ှာ လည်းမဆန်းပေ။
သရ့ိုာတငွ်
အ တကွခ်ျစ်ေရးထက်
တငိုးပြညန်ှင လ့် မျူုိးအတကွ်
ပြ ည်ေရးခက်
ဆသို ကသ့ဲ့ို
အ သကစ်နွ့် တကို ပ်ဝွဲ ငရ်န်
သမူ၏နလှုးံသားကို
သဓံဌိာနခ်ျမတှခ်သ့ဲူ
အချစ်ေရးအတကွ်
မညသ်ညအ့် ချနိက်မျှ
ဦးစားမပေးခေ့ဲ ချ။ ထအို ဖြစသ်ညပ်င် မကင်းဘွုိင၏်ခငို မ်ာသော စ တိဓ်ါတက်ို ပေါ်လငွေ်စသည။် ဤသြို့ဖင့် အသက်(၂၁)နစှမ်ျှပင် မပြညေ့် သးသော မကင်းဘွိုငသ်ည် အရယွန်ငှမ့် လကိုေ် အာင်သက္ခိာသမာဓိ ပြညစ့် သုံြူဖစ်သည။် သမူသည်ကကူီးလမျူုိးအဖြစ်ေမွးဖွားလာရခြင်းအပေါ် အမြပဲငဂ်ဏုယ်မူေိကြာင်းပြောကြားလေရ့သှိ ည။် ‘‘ကျမကို ကျမ ဂဏုအ်ယဆူုးံဖြစတ့်ဲ အရာကတော် ဒီလောကကြီးထမှဲာ ကကူီးလမျူုိးအဖြစ် မေွးဖွားလာခြင်းနငှ့် ခရစယ်န်ဘာသာကို
သကဝ်ငယ်ြုံကညတ့်ဲ
မိသားစမှု
ဆင်းသက်လာခြင်းတြို့ဖစတ်ယ‘် ‘
ခေ့ဲ လသည။် ဘာသာရေးတငွ် ပါဝငလ်ှုပရ်ှားမမျှုား Kimboi သညင်ယစ်ဥက်ာ လမ စှ၍ ဘာသာတရားကို အလနွက်ငိုးရငှိ်းကြညည်ိုခသ့ဲြူဖစသ်ည် ။ မလူတန်းကျောင်း သဘူဝမစှ၍ Sunday Schoolသို့ အချနိမ်နှမ်နှတ်က်ေရာကခ်ေ့ဲ သာကြောငလ့် ည်း သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခြေခသံေ ဘာ တရားကို ငယစ်ဥက်ပင် နားလည်းခြဲ့ပီးဖြစသ်ည။် သမူတက်ေရာကသ်ညS့် unday School၌ ကျင်းပသော စာမေးပမျွဲားနငှ့် ကျမ်းစာရတြွ်ပငို ပ်မျွဲားတငွ် ပထမဆ၊ုဒတုယိဆမျုားကို မကြာခဏ ဆတွခ်ူးနငိုေ် သြာေ ကာ င ဘ့်ာသာရေးနငှ့် ပတသ်က၍်ချီးမမွ်းခြင်းခခံရ့ဲ သည။် မလူတန်းကျောင်းသဘူဝတ ငွပ်င် တမူးမြို့ ထာဒနို စြှ်ခင်းအသင်းတော် KVTBA မကျှင်းပသော Conference တခတုငွ် လြူကီးများနငှ့် ရင်ေဘာ င တ်န်းပြီး ကျမ်းစာပြငို ပ်သွဲ ဝ့ို င်ြပငို ရ်ာ ပ ထမ ဆဆုတွခ်ူးနငို ခ်သ့ဲ ည။် ဤသို့ အရယွန်ငှမ့် လကိုေ် အာင် ထူးချွန်ထက်ြမက်ေသာကြောင့် မဘိေ ဆမျွုိးအသငိုးအဝငိုးများကို မျကန်ှာပငွေ့် စခေ့ဲ လသည။် မကင်းဘွုိငသ်ည်တသကတ်ာလုးံဝညိာဥေ် ရးရာ၌ အစဥသ်ဖြငတ့် က်ြကခွသ့ဲြူဖစသ်ည။် မသိားစတုငွအ်ကြီးဆုးံ ဖြစသ်ညန်ငှအ့် ညီ အသက၁်၎နစှမ်စှ၍ မသိားစ၏ုဝတ်ြပုပမျွဲားတငွ် ဦးဆောငခ်ြဲ့ပီးဖြစသ်ည။် သူ၏အထကတ်န်းကျောင်းသူ ဘဝ တငွမ်လူငူယအ်ဖက့ွဲို အကောင်းဆုးံဦးဆောငန်ငို ခ်ြဲ့ပြီဖစသ်ည။် ထအ့်ို ပြငက်လေးများ၏Sunday School ဆရာမအဖြစ်ဆော င ရ်ကွခ်ေ့ဲ လသည။် ထအို တေအ့ွ ကြုမျာံးသညပ်င် တောလ်နှေ်ရးကဆို ငန်ရွဲာ၌ များစွာအထောကအ်ကြူပုခေ့ဲ ပသည။် ဒေလြီမေ့ို ရာကရ်ချှိနိမ်စှ၍တော လ်နှေ်ရးလပုင်န်းများတငွေ်ရှ့ဆုံးမတှက်ြကစွာပါဝငလ်ာ သည တ့် ငိုေ် အာငသ်မူသည ဘ်ာ သာ ရေးကမို ပစပ်ယဘ်ဲ ပ၍ို ပငအ်မှေုတာ အ်တကွေ်ဆာ င ရ်ကွခ်ေ့ဲ လသည။် ဤသြို့ဖငသ့် သူည် ပြ ညပ်ရောက်ေတာ လ်နှသ်မျူား
အကြားတင်ွလော ကနီငှေ့် လာကတုရ္တာအရေးအတကွ် နငို င်ေံရးနငှဘ့်ာသာရေးကို အချုိးညညီ လပုေ်ဆာ င ခ်သ့ဲ အူဖြ စ်အ သအိမတြှ်ပုခြင်းခခံရ့ဲ သည။် ဤသြို့ဖငသ့် မူသည်ေ ဒ လေီရာကခ်ရစယ်ာန အ်သငိုးအဝငိုးမှ ယြုံကညအ်ားကိးုကြသကသ့ဲ့ို နငို င်ေံရးသမားများအနေနငှလ့် ည်း
သမူ၏ထူးခြားချကအ်ပေါ်
အ သအိမတှမ်ြ ပုဘဲ
မနေနငိုြ်ကပေ။
ေ ဒ လေီရာက်
မြနမ်ာဒ ကုသ္ခ ညမ်ျားမဖှစ့ွဲ ည်းထားသည့် Burmese Christian Association(BCA)အသင်းတော၏်အားကိးုမအှုခရံဆုးံ ပဂ္ဂုလိမ်ျားအနှက် ထပိဆ်ုးံမပှါဝငခ်ေ့ဲ လသည။် ဤသြို့ဖင့် ၂၀၀၂တငွ် အမျုိးသမီးဌာန၏အလပုအ်မှေုဆာငအ်ဖဝ့ွဲ င၊် ၂၀၀၃ ခနုစှတ်ငွ် ဘဏ္ဍာရေးမှုး၊ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ခနုစှမ်ျားတငွ် ကေ လး သငူယမ်ျား Sunday Schoolဆရာမ၊ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၄ခနုစှ် တငွ် လူင ယ မ်ျား၏အထွေေထွ အ တငွ်းရေးမှုးအဖြစ် ထမ်းဆောငရ်င်းအသင်းတော၏်ယြုံကညအ်ားကိးုသူ တစ်ေယာက်ြဖစ် သည န့် ည်းတူBCA၏
စနေနေတ့  ငိုးကျငပ်သည့်
အစာရှောငဆ်ေုတာင်းပတွဲ ငွလ်ည်း
မပျကမ်ကကွတ်က်
ေ ရာကခ်ြဲ့ပီး
အသင်းတော် ဖစ့ွဲ ည်းတည်ေထာင လ်ာသည(့် ၁၀)နစှ် မြောကပ်ွေဲ တြာ်ကီးကို စညက်ားသကိုြ်မိုကစ်ွာကျင်းပ နငိုေ် ရးအတကွ် ရပံေုံ ငရွှာဖေရွနက်င်းဘွုိငအ်ားရေွး ချယ်ြခင်းခရံသူ တဦးလည်းဖြစသ်ည။် KSDF မသိားစဝုငမ်ျား စနေနေည့  တငိုးကို ဝတ်ြပုဆေုတာင်းပအွဲ ဖြစ် ပြုလပုက်ျင်းပလာခြဲ့ကသည။် ကင်းဘွုိင် အနေနငှ့် ထဝို တ်ြပုပမျွဲားအတငွ်း မကြာခဏပြောကြားခသ့ဲ ညအ့် ချကမ်ှာ ကျမတK့ို SDFအဖဝ့ွဲ ငမ်ျားအနေနငှ့် ကကူီးအမျုိး သားရေး အတကွတ်ကို ပ်ဝွဲ ငသ်ညေ့် နရာမှာ ဘုရားသခငရ့်ဲအကအူညကီရို ယနူငိုေ် အာင်ြကိုးစားရမယ။် ဘရုားသခငမ်ပါရင် ကျ မ တရ့ို ညရ်ွယခ်ျကမ်အောင်ြမငန်ငို ဘ်ူး။ ဘရုားသခငန်ငှအ့် တရူမှိ သှာအောင ပ်ကွဲ ဆို ငန်နွဲ ငို မ်ညဟ်ု ပြောကြားခေ့ဲ လသည။် မကင်းဘွိုငသ်ည်
မဘိ၏ကျေးဇူးကြိုပနလ်ညဆ်ပလ်ေို သာလ်ည်း
အမျုိးသားရေးတာဝနက်ို
သမ ငိုးပေး
တာ ဝ န အ်ဖြစ်
ေ ကျ ပ နွစ်ွာထမ်းဆောငသ်ညန်ငှအ့် ညီ သ၏ူမဘိကျေးဇူးကို ကျေပနွစ်ွာဆပခ်ငွ့် မရနငို ခ်သ့ဲ ည့် အဖြစက်ို ခရစသ်ကရ္ကာဇ်၂၀၀၄ခနှုစ တ်ငွB်CA၌ကျင်းပသော မခိငမ်ျားနေတ့  ငွ် သမူရတွဆ်ခို သ့ဲ ည့် ကဗျာအရ သရိနှိ ငို သ်ည။် ကဗျာ၏ အမညမ်ှာ ဗနေမ္ဓာတရြံဖစ်ြပီး အနိယ္ဒိ မျုိးချစပ်ဂ္ဂုိုလ်ြကီး ဘစီချီာတာဂျမှီ မခိင၏်မေတ္တာကို မြေကြီးနငှန့် ငှိုးယဥြှ်ပီး စပဆ်ထိုားခြင်းဖြစရ်ာ ထကို ဗျာကို စာဖတသ်တူို့ သရိနှိ ငို ရ်န်ေ အာကတ်ငွေ်ဖြာ်ပထားပေသည။် 1. ငါ၏မခိငသ်ည်ေ သာ ကသ်ုးံရန် ရေချုေိရအေးတို့ တသငွသ်ငွ် စီးဆင်းရာဖြစ၏်။ 2. ငါ၏မခိငသ်ည် စားသုးံရန် သစသ်ီးဝလံ ပန်းမနတ့်ို သီးပငွရ့်ာဖြစ၏်။ 3. ငါ၏မခိငသ်ည် လေပြေလေညငှ်းတို့ ဆောသ်ငွ်းတကို ခ်တရ်ာဖြ စ ၏်4. ငါ၏မခိငသ်ည် ပန်းမြငို လ်ယခ်ရီးနငှ့် စမြိ့်ကီးမြငိုြ်ကီး ဂနငိုြ်ကီးဖြစ၏်။ 5. ငါ၏မခိငသ်ည်ေ သာ တ်ာလရောင် ပြောင်ေပြာင် ထနိလ်င်းရာဖြစ၏်။ 6. ငါ၏မခိငသ်ည် မခိင၏်အနနဂ္တဏုက်ို ချီးကြူးသည့် အသနိ်းအသောင်း မကပေါများလှေသာ ထောပနာသြဘာသတံို့ တစရ်မံစေဲသာ နေရာဖြစ၏်။ 7. ငါ၏မခိငသ်ည်အ သနိ်းအသောင်းမကသော လကရ်တုံ က့ိုို ဆနသ့် န်းရာဖြစ၏်။ 8. အ-ို မခိင၊်မခိငက်ို အားနသွဲ ၊ူအားငယသ်ူဟုအ ဘ ယ သ်ဆူဝို အ့ံ န့ံ ည်း။ဘနုးသားလကရ်ုးံအား စမွ်းပကား သတန္တိ ငြှ့်ပညစ့်ေုံ သာ အမို ခိငအ်ားငါသည်ပေူ ဇာက်န်ေတာ့ ပါ၏။ 9. ခပသ်မိ်းသော ရနခ်ပင်းတက့ိုို နမှိန် ငှ်းချေမနှုးတတ်ေသာ အ မို ခိငအ်ား ပေူ ဇာက်န်ေတာ့ ပါ၏။ 10. မခိင်သည် ငါ၏ပညာတန်ေဆာင် ဥာဏအ်လင်းရောငတ်ည်း။ 11. မခိင်သည် ငါ၏တာဝနဝ်တရ္တာသာတည်း၊မခိငသ်ညန်လှုးံသား သာတည်း။ 12. ဇရပတ်န်ေဆာင်း၊ဂှေုကျာင်း ဗမိာန တ်တို ငွ် မခိင၏်ရပုရ်ညသ်ဏ္ဌာန် ပဟုံ နသ်ငြွ်ပငက်ို ငါမြင၏်မြ ငေ် သာငါလျှင် မခိငက်ို ပေူဇာက်န်ေတာ့ ပါ၏။ 13. အမို ခိင-် မခိငသ်ညက်ားလကန်ကဆ်ယပ်ါးတြို့ဖင့် ဝငဝ့် ငဝ့်ါဝါ တနဆ်ာ ဆင အ်ပသ်ည့် ထူးထူးမြတ်ေသာ ဥာဏေ် ရာငသ်ာလျှင် ဖြစ်ေပစ။ွ 14. အ-ို မခိင၊်မခိငသ်ည် ပဒမုာံ္မကြာပန်းတို့ အလယတ်ငတ့် ယစ်ပံယ်လျှက်ေနသော ဥစ္စာသာလျှင် ဖြစ်ေပစ။ွ 15. အ-ို မခိင၊် မခိငသ်ည် ပညာရောငက်ို ပြတတ်ေသာ ချုသိာသည့် စကားသာလျှင် ဖြစ်ေပစ။ွ
16. မခိငသ်ည်ြမတ၏်တည်ြငမိေ်သာနလှုးံလည်းရ၏ှိ ဖြူစင်ြမငြ့်မတ်ေသာ ကျငဝ့် တလ်ည်းရ၏ှိ ။ချြုိပုံးသော အမအှုရာလည်းရ၏ှိ ရေချုေိရအေးနငှလ့် ည်း ပြညစ့် ၏ုံ သစသ်ီးချုချိဥန်ငှလ့် ည်း ပြညစ့် ၏ုံ ။ 17. အမို ခိင-် -မခိငအ်ားငါသည်လကစ်မုံိးု၍ ရခှိးုပေူဇာ် ဖူးမြောက်န်ေတာ ပ့ါ၏။ မတှခ်ျက။်
။မ-ကင်းဘွုိငသ်ည် အထက်ပါကဗျာအား အလတွက်ျ ကက်ာရ တွဆ်ခိုြဲ့ခင်းဖြစသ်ည။်
ကင်းဘွိုင၏်နောကဆ်ုးံနေရ့  ကမ်ျား လူဟ သူညမ်ှာ သေမျုိး(သိုမဟုတ်) လတူငိုးလတူငိုးသည် တချနိခ်ျနိတ်ငွ် မ လဧွဲ ကန် သေခြင်းကို ရငဆ်ငို ရ်မည် စသည်ြဖင့် သေခြင်း၏ သဘောသဘာဝကို ကျနွပ်ု တ်လ့ိုသားတင်ိုး သရြှိကပြီးဖြစသ်ည။် ထအ့ို တူ ထေို သမင်းသည် လသူားများကို ခေါ်ဆောငရ်ာ တငွ် ဆင်းရသဲနူငှ့် ချမ်းသာသူ၊ ဂဏုရ်သှိနူ ငှ့် ဂဏုမ်သ့ဲ ၊ူ အသက်ြကီးသနူငှ့် ငယရ်ယွသ်ူ ပ ညာတတသ်နူငှ့် ပညာမသ့ဲ ၊ူ လဆူိးုနငှ့်လေူကာင်း ယောကက်ျာင်္းနငှမ့် နိ်းမ အစရသှိ ည့် လသူားများမသှတမ်တှထ်ားသည့် စနှုံန်းနငှဂ့် ဏုအ်ဂါင်္ရပမ်ျားအပေါ် အခြေခြံခင်းမရသှိ ညက်လို ည်း ကျွနပ်ု တ်သ့ို ရိထှိားပြီးဖြစသ်ည။် ဤသို့ဘကလ်ကိုြ်ခင်းမရှိ ဘလဲတူငိုးလူတငိုးအပေါ်တငွ် ဤသေခြင်းသည် တရားစရီငတ်တ်ေလရ့သှိ ညန်ငှအ့် ညီ လသူာ်းတသ့ို ည် သေဆုံးမတှုငိုး သည် တရားသဖြငေ့် သဆုးံခြင်း သာလျှင်ြဖစသ်ညဟ်ု လသူားများမှ တညတီညတွတ်ည်း မတှခ်ျ ကခ်ျလေရ့သှိ ည။် ထု့်ိ ကြောင့်လည်းမညသ်မျှူ
ရှောငလ်၍ွဲ မရနငိုေ် သာ
ထေို သခြင်းကပို င်
ခေါ်ဝေါ်သမတြုကသညက်ို
ကြညြ့်ခင်းအားဖြင့် လသူားများသေဆုးံကြရာ၌ မညသ်မ့ို ညပ်ေုံ သဆုးံကြ စေကာမှု ထေို သဆုးံခြင်းဟူသမျှမှာ တရားမျှတမှု ရသှိ ညဟ်ေူသာ
အဓပ္ပိါ ယေ် ဆာ ငေ် နသည။်
မကင်းဘွုိငသ်ည်
င ယရ်ယွသ်ြူဖစ်ေသာကြောင့်
ယခ ကုသ့ဲ့ို
မ ကယွလ်နွသ်ငဟ့်ုပြောဆေို နကြသော ကျနောတ်သ့ို ညသ်မူအပေါ် နြှေ မာတသသည အ့် ဖြစက်ို အရင်းခြံပီး ကောကခ်ျ က် စြွဲပီးဖြစ်ေသာ်လည်း ဘရုား၏အမြငန်ငှလ့် သူားတ၏့ို အမြငမ်ှာ တခါတရအံလနွဆ်နက့်ျငတ်တရ်ာ ဤကစိသ္စ ည် ဘုရား၏ အစစီဥပ်င်ြဖစ်ေကြာင်း သြို့ ဖစ၍်ဘရုားသခင်၏အစစီဥအ်ရ ကြုေံတရ့ွ ငဆ်ငိုေ် နရသော အခြေနေအပေါ် လကမ်ခနံငိုြ်ခင်း သည ပ်င်ဘရုားသခင၏်အ လေို တာန်ငှ့် ဆနက့်ျင်ေကြာင်း သေခြင်းတရားနငှပ့် တသ်က၍်ဘာသာရေးဆရာ၊ဆရာမ များက ကင်းဘွိုငက်ွယလ်နြွ်ခင်းအပေါ် လာရောကန်စှသ်မြိ့်ကသည။် အခြားတဖကတ်ငွလ်ည်း ကမ္ဘာလ့သူားများအတကွ် စတိ် ချောကခ်ျားစရာ အများဆုး့ဖြစ်ေပါ်စေသည့် အချကတ်စခ်ကုို ထောက်ြပမညဆ်ပိုါက ထေို သခြင်းတရာပင်ြဖစ်ေလသည။် ယခ ကုစိတ္စ င်ွလည်း မကင်းဘွိုငမ်ှ ရတုတ်ရ က် ကျ နွေ်တာ တ့်ိုကစို နွခ့်ွါသည့် အဖြစ်ေကြာင့် KSDF အဖွဲ့ဝငမ်ျားသာမကဘဲ ထအို ခြေအနေကြောင့် ရောကရ်လှိာသမျူားအနေဖြင့် မညသ်မ့ျှို မယြုံကညန်ငိုြ်ကသလို ထကို သ့ဲြို့ဖစလ်ာမ ည ဟ်ု လုးံဝမ ထင မ်တှေ်ကြာင်း မညသ်မ့ျှို ကြိုတင်ြပငဆ်ငမ်မှုရှေိ ကြာင်းကို ဖြစပ်ျက်ေနသော အခြေအနေက သက်ေသပြနေရှေိ ပသည။် သရ့ိုာတငွ်
ကျနောတ်မ့ှိုာ
ထအို ဖြစန်ငှပ့် တသ်က၍်
ကြိုတငန်မိတိေ်ပးခြင်းခခြံဲ့ကသည။်
ကယို တ်ငိုန် စြှ် ကမိတ်တိ အပိမ်က်ေပး ခြင်းခခံသ့ဲ ည။် ပထမအကြမိမ်ှာ သမူကယွလ်နွမ်(ီ ၁၀)ရက် အလခို နက့် ဖြစသ်ည။် သေ့ို သာ် လည်းအမိမ်ကက်ို အယအုံ ကြည် မရှေိ သာကျနောသ်ည။် သူ့အားကျန်းမာရေးကို ဂရစုကို ရ်နသ်ာပြောပေးခသ့ဲ ည။် ဒတုယိအြ ကမိမ်ှာ သမူအ သဲ အ သန ဖ်ျားသည့် နြေ့ဖစသ်ည။်ထေို နတ့  ငွ် ကျနောသ်ညည်က ကင်းဘွိုငက်ို ပြုစခုေ့ဲ သာ ကြောင့် အပိခ်ျငစ်တိေ်ပ်ါလာကာနာရ ဝီကမ်ျှအပိေ်ပျာခ်ရ့ဲာထူးဆန်းသော
အမိမ်ကတ်ခကို ထပမ်မံကခ်ေ့ဲ လ သည။်
ထသို တ့ို ငိုအောင် ကျနောအ့် နေဖြင့် ယခကုသ့ဲ့ို ဖြစလ်ာမ ည ဟ်ု လုးံဝမထငမ်တှ် ခေ့ဲ ပ။ ဒတုယိအဖြစမ်ှာWLB၏နငို င်ေံရးစကားဝငိုးအတကွ် မဖြူနငှအ့် မိတ်ငို ရ်ာရောက် ဖတိစ်ာသွားပေးစဥက်ဖြစသ်ည။် မညသ်ညေ့် နရာတငွမ်ဆို အလျငစ်လြိုပီးမြောကလ်တို တ်ေသာ ကင်းဘွုိငသ်ည်ထေို နတ့  ငွမ်ျားစွာထူးခြားသညဟ်ု သူ ၏ အဒေါ်(မဖြူ)ထမံသှရိသည။် မဆန်းပွးီ ပြောပြချကအ်ရ ကင်းဘွုိငမ်ှ ဒါဟာနောကဆ်ုးံအကြမြိ်ဖစန်ငို သ်ညဟ်ြုေ ပာဆခို့ဲ ကြောင်းကြားသရိသည။် တတယိအဖြစ်မှာ တနလာေ င်္ နတ့  ငွ် ကျင်းပလေရ့သ်ှိ ည့် နငို င်ေံရးစကားဝငိုးတငွ်
သအ့ူ နေဖြငမ့် သိားစု အကြား
တစ ဉ်ီးနငှတ့် စဉ်ီး နားမလည်းမမျှုား ရ ပှိါက ထိုအာဃာတများကို ဖြောကဖ်ျက်ြကရနန်ငှ့် အကယ၍်တစ တုံ စ်ေယာ ကသ်ည။်
သူ့အား မကျေနပသ်ညအ့် ကြားမှ သေဆုံးမညက်ို မလလိုာကြောင်း ပြောဆခို သ့ဲ ညအ့် ပြင် သူ့အပေါ် အငြိုးထားမညဟ်ု ယဆူသည့် လပုေ်ဖာက်ဖို က် အချုိ့မှ သအ့ူ ပေါ် ထားရသှိ ည့် သဘောထားကို မေးမြနက်ာ အပြနအ်လနှ် ဆေွးနေွးရင်း စကားဝငိုးကို အဆုးံသတခ်ြဲ့ကသည။် စ တုထ အ္တဖြစမ်ှာ
အမိန်ီးချင်းဖြစသ်ူ
မရမှီ(KSDF)ရုးံခန်း၌
လြူကီးငသိုြံကားပြီး
လာြ ကည ရ့်ာ
ထငို သို မှာံ
တတိသ်ွားသည်ဟု ပြောကြားခေ့ဲ ကြာင်းသရိသည။် ပဥမ္စ အ ချကမ်ှာ အမိခ်ျင်းကပလ်ျှကရ်ှေိ သာ ဒေါ်ခငမ်ာသည် မကင်းဘွိုင် မကယွလ်နွမ်ီ (၂) ရကအ်လတို ငွ် အ လနွ် ထူးဆန်းသော အဖြစတ်ခကို သရိခ်ှိ ရ့ဲ သည။် ဒေါ်ခငမ်ာ၏ ပြောပြချကအ်ရ အ သဘုအလောင်းကသ့ဲ့ို ထင်ေန ရသော အရာတစခ်ကုေို စာင်ြဖင့် အပုထ်ားသည့် သဏ္ဍာနတ်ခအုား သူ၏အမိမ်ကလ်လို တကယအ်ဖြစအ်ပျကလ်လိုေို တခ့ွ ရ့ဲ သဖြင့် ဘရုားတင်ွရေ စ ကခ်ျ အမျှဝေခေ့ဲ ကြာင်း ကြားသခိေ့ဲ လသည။် ဆဌ မ အ ချကမ်ှာ ယခနုစှဇ်နွလ်အ တငွ်း ညလီာခနံ ငြှ့်ပညတ်ွင်းစည်းရေုံ ရးအတကွ် န ယစ်ပမ်ထကွမ်ီ တစ ရ်က် အ လတို ငွ် သမူကယို တ်ငိုအပိမ်က်တ စ ခ်မုကရ်ာ ထအို မိမ်ကအ်ရ အဖွားကြီးတစဉ်ီးသည် KSDF အား ပျက်ရာပျက်ေကြာင်း နည်းမျုိးစြုံဖင့် နှောကယ်ကှရ်န်ြကုိးစားခသ့ဲ ည။် ထအို မိမ်ကထ်ဲ တငွပ်င် ကင်းဘွိုငသ်ည်ထအို ဖွားကြီးအား ထကို သ့ဲ မ့ို မိတို့ မသိားစကို မနှောကယ်ကှရ်န် တားမြစရ်ာ အဖွားကြီးမှာ ဒေါသကြီးစွာဖြင့် သမူအား လကည်ုိးထိးုခဲ့သညဟ်ု သရိသည။် အဌမအချကမ်ှာ ယခနုစှ် ဇနွလ်အ တငွ်းညလီာခနံ ငှ့် ပြညတ်ငွ်းစည်းရုးံရေးအတကွ် န ယစ်ပမ်ထကွမ်ီ တစ ရ်က် အ လတို ငွ် သမူကယို တ်ငိုအပိမ်က်တ စ်ခ မုကရ်ာ ထအို မိမ်ကအ်ရ အဖွားကြီးတစဦ်းသည်KSDFအား ပျက်ရာပျက်ေကြာင်း နည်းမျုိးစုံ ဖြငေ့် နှာကယ်ကှရ်န်ြကိုးစားခသ့ဲ ည။် ထအို ပိမ်ကထ်ဲ တငွ် ကင်းဘွုိငသ်ည်ထအို ဖွားကြီးအားထကို သ့ဲ့ို မမိတို့ မသိားစကုို မနှောကယ်ကှရ်န် တားမြစရ်ာ ထအို ဖွားကြီးမှာ ဒေါသကြီးစွာဖြင့် သမူအားလက်ညိးုထိးုခသ့ဲ ည်ဟသုရိသည။် ထအို ဖြစ် နစှပ်တသ်က၍်ကင်းဘွုိငသ်ည် ဆရာမမေရထီံ ပြောပြလျကဆ်ေုတာင်းခေဲစလေသည။် သမူမ ကယ်ွလ နွမ်ီ (၃)ရက် အလတို ငွ် မဖြူသည် အကြောင်းမရဘှိဲစားမရ အပိမ်ရအောငပ်င်လမွ်းဆွေးသည့် ဝေဒနာခခံေ့ဲ ကြာင်း……။သမူဘဝ တင်ွနောကဆ်ုးံတက်ေရာက် ခ သ့ဲ ည့် အခန်းအနားမှာ သမူကယွလ်နွမ်ီ တစ ရ်ကအ်လို ဖြစ်ေသာ ၅/၈/၂၀၀၄ ရက်ေနတ့  ငွ် UNLDမှ ကြီးမှးုကျင်းပသည့် အခြေခဖံစ့ွဲ ည်းပနုံ ငှ့် ပတသ်ကသ်ည့် နှးီနှောဖလယှ် ပပွဲ င်ြဖစသ်ည။် သေူနာကဆ်ုးံဖတခ်ေ့ဲ သာ စာအပုမ်ှာ မကို က်ယအ်နိဂ်ျ လ၏ီအတ္ထုပတစ္တိာအပြုဖစသ်ည။် ထစိုာအပုအ်စ တငွ် စာရေးဆရာကြီး အငို ဗ်ငစ်တနုးသည် မကို က်ယအ်နိဂ်ျ လ၏ီစရကို အ်ားပေါ်လငွေ်စရနန်ငှ့် မကို က်ယအ်နိဂ်ျ လ၏ီအ တငွ်း စတိက်ို အောကပ်ါအတငိုး ဖြော်ပခရ့ဲာထအို ဖြစသ်ညပ်ငက်င်းဘွုိငအ်ား ဤကဲ့သြို့ဖစလ်ာမ ည က်ို ကြိုတငန်မတိ် ပြသကဲ့ သို့ ဖြစ်ေစသည။် ထစိုာအပုတ်ငွေ်တရ့ွ သည့် ဖြော်ပချကမ်ျားမှာ---“ငါဟာ ကျောက်ြဖူသားတုးံကို ချစ်ြမတန်ိးုခတ့ဲ ယ။် ပန်းချေီဆးကလို ည်းနစှသ်ကခ်တ့ဲ ယ။် ဗသိကုာ အ တတပ်ညာ ကလို ည်း သဘောကျတာဘ။ဲ မဗျာနငှလ့် ည်ေပျာပ်ကို ခ်တ့ဲ ယ။် ငါရဲ့ဆေမျွုိးတေကွလို ည်းချစတ်ာဘ။ဲ ဘရုားသခငက်လို ည်ြ ကည ည်ခို တ့ဲ ယ။် ဘရုားသခငဖ်နဆ်င်းထားသမျှ လေ့ူ လာကကလို ည်းချစတ်ာဘ။ဲဘုရားသခငက်လို ည်း ကြညည်ခို တ့ဲ ယ။် ဘရုားသခငဖ်နဆ်င်းခတ့ဲ့ဲ လေ့ူ လာကကလို ည်း မေတ္တာပွားခဲ့တယ။် ငါဟာလူ့ဘဝကြကီို အစမွ်းကနြုမတန်ိးုတယ။် သေခြင်း တရားဆတိုာလည်း လဘ့ူ ဝဇတသ်မိ်းတစခ်ု အနေနငှ့် နစှသ်ကတ်ာ ဘဲ ” ဟ၍ူပါရပှိါသည။် သမူထမှံ ကြားရသည့် နောကဆ်ုးံစကားမှာ (DDU)ဆေးရ၌ုံ အ သကမ်ထကွမ်ီ ၁နာရခွီဲ အလ၌ို ဖြစသ်ည။် ထအို ချနိမ်ှာသမူအ တကွအ်လနွစ်ိးုရမိေ်နြ ကရာဘာ မ မှတတန်ိုင်ေသာ ကျနောတ့်ိုသည် သအ့ူ တကွ် ဆေုတာင်းခြင်းဖြငသ့်ာကညူနီငို ခ်ြဲ့ကသည။် ထအို ချနိတ်ငွ် သ၏ူအဒေါ်အား အနား၌ခေါ်ခငိုးရာ မဖြူသညလ်ည်း အနားကပက်ာ ကင်းဘွိုငအ်ား
ဘရုားသခငထ်ံ ဆေုတာင်းရန် တကို တ်နွ်းခသ့ဲ ည။် မဖြူသည် ကင်းဘွိုငအ်ားသအူလတွရ်သည့် ကျမ်းပဒို တ်ခခုကုရို တွ် ပြရန် တကိုတနွ်းခရ့ဲာမကင်းဘွိုငသ်ည် မယြုံကညန်ငိုေ် လာ က်ေအာင် ကြညလ်င်ေသာ အသြံဖင့် ရငှယ်ာ ကပြုသဝါဒစာ စောငဟ်ု အစချကီာရ တွဆ်ခိုေဲ့ လသည။် ရေဆာသညက်ပို င် ပသီအောင် မပြောနငိုေ် သာ အချိနတ်ငွ် သမူထမံထှကွလ်ာသော ထအို သေံကြာင့် ကြားရသူ နစှဉ်ီးတမ့ှိုာ တနုလ်ပှုခ်ြဲ့ကသည။် ထကျိုမ်းပိုဒန်ငှ့် ပတသ်က၍်သ၏ူလကစ်ကျွဲမ်းစာအပုမ်ှ ရငှယ်ာ ကပု သြဝါဒစာစောငတ်ငွရ်ှာဖြွေကညရ့်ာ၂း ၅ နငှ့် ၄း ၁၄ တမ့ှိုာ သေချာစွာ မျဥ်းတားခြင်း ခလျံ ကရ်ရှိာထကျိုမ်းပဒို ၏်အခန်းကြီး (၂)အငယ် (၅)တငွ-် -----‘‘ချစ်ေသာ ညအီစက်တို့ို နားထောင်းကြလော၊့ လောကတငွ် ဆင်းရဲသော သတူသ့ို ည် ယြုံကည်ြခင်း ရတနာကို ရစေခြင်းငှါ ဘရုားသခငက်ို ချစ်ေသာ သတူို့အား ပေးမညဟ်ု ဝနခ်ေံတာမ်ှေုသာ နငို င်ံတော်၏အမွေ ဖြစ်ေစခြင်းငှါ၎င်း၊ ထသို တူက့ိုို ရေွးကောက်ေတာမ်၏ူ‘‘` ဟ၍ူပါရသှိ ည။် ‘‘နက်ြဖန်ေန၌့ 
( ဆကလ်က၍်အခန်းကြီး(၄) အငယ(် ၁၄) တငွ)်
အဘယသ်ြို့ဖစမ်ညက်ိုကျနွပ်ုတို့
သငတ့်ို
အသကသ်ည်
အဘယသ်ေ့ို သာအသက်
ဖြစ်သနည်း။ ခဏတာ ထငရ်ှားပြီးမှ ကယွေ်ပြာကတ်တ်ေသာ အခိးုအငြွေ့ဖစ၏်‘‘ ဟ၍ူ၎င်း ပါရှေိ လသည် အဆပိုါအဖြစအ်ပျကမ်ျားမှာ တကို ဆ်ိုငမ်ှေုလာ ( သမ့ို ဟတု) နမိတြိ်ပခြင်းလော ဟ၍ူအ တအိကျ အြေ ဖ ထတုရ်န်ခ ကခ်ေဲသာ လောက၏လျှုိ့ဝကှခ်ျ ကန်ငှဆ့် န်းကြယမ်ပှုင်ြဖစ်ပေသည။် နဂိုးံလော ကတင်ွနေ ထငိုြ်ကသော လသူတဝ္တါမနှသ်မျှသည် သဘာဝအရ သေဘေ့ို မွးဖွားလာခြင်းပင်ြဖစရ်ာ လသူားတငိုး အနေ ဖြင့် သေဆုးံပုံ သေဆုးံနည်းကြွဲပားနေကြသည့် တငိုေ် အာင် တချနိခ်ျနိတ်ငွ် သေဆုးံကြမညမ်ှာ မြေကြီးလကခ်တ်မ လွေဲ ပ။ ဗမာစကား၌ ကယွလ်နွေ်သ ဆုံးသ မျူားနငှ့် ပတသ်က်ြပီး ပျောက်ေသာ သရှူာလျှင်ေတ၊ွ့ သေသောသြူကာရင်ေမ့ ဟေူသာ ဆရိုိးုစကားရခှိေဲ့ ပသည။် ထအို ဆမျိုားသည်ပငလ်ျှင် စတိေ်သာ ကေ ရာကသ်မျူားကို တရားသဘောဖြငေ့် ဖြသမိေ့် စလေို သာ ကြောငေ့် ပ်ါပေါကလ်ာ ဟန တ်ေူပသည။်သရ့ိုာတငွ် မကင်းဘွိုင်ကသ့ဲေို့ သာ သမငိုးပေးတာဝနက်ို ကျေပြနွစ်ွာထမ်းဆောင် သည့် အဇာနည် ရေဲမတစဉ်ီးအား ကြာလာသညန်ငှအ့် မျှ မေေ့  ပျာကရ်မညဆ်ပိုါကKSDF သမငို ၌်ရာဇဝငရ်ငိုးရာကျပေ မည။် အဘယေ့် ကြာင့် ဆေို သာ် သမူသည် KSDF သမငိုး၌ပထမဆုးံ သမငိုးပေးတာဝနက်ို ကျေပြနွစ်ွာထမ်းဆောငခ်သ့ဲူပင်ြဖစသ်ည။်သမူ၏ပေးဆပမ်၊ူ စနွလ့်ွတအ်နစ်နာခမံနှုငှ့် ခငို မ်ာသောတောလ်နှေ်ရး စတိဓ်ါ တတ်မ့ှိုာ KSDF အတကွသ်ာ မကဘဲ အနာဂတက်ကူီး သမငိုးတငွ် စြံပအတယုစူရာအဖြစ် ထာဝရ ကျနရ်စမ်ည့် သမငိုးစာမျကန်ှာသစက်ို ဖငွလ့် စှလ်ကိုခြင်းပင် ဖြစ်ေပသည။် ဤသြို့ဖင့် မကင်းဘွုိငသ်ည်သမ ငိုးပေးတာဝနက်ို အသကထ်ကဆ်ုးံကျေပြနွစ်ွာဆောငရ်ကြွ်ခင်းအားဖြင့် သမူသာသေသော လ်ည်း နာမညမ်သေသည့် မျုချိစသ်ရူေဲကာင်း အာဇာနညမ်အဖြစ် ကကူီးသမငိုးတငွ် ထကို ထ်ကို တ်နတ်န်ေ န ရာေ ပးရနမ်ှာ အမျုိးကချိုစ်ေသာ ကကီူးအမျုိးသားအယောက်တငိုးအပေါ် တာဝနရ်ှေိ ပသည။် အဘယ့်ကြောငဆ့်ေို သာ် သမူသည် တငိုးပြညန်ငှ့် လမျူုိးကချိုစ်ေသာ ကကူီးပြညသ်ူအားလုံးလကိုေ် လျှာကရ်န် KSDFခင်းထားသည့် တောလ်နှေ်ရးလမ်းကြောင်း ကသို သံယကင်းရငှ်းစွာ နောက်ဆုးံထကွ် သ က်အ ထိမ မ တှိ မ်သနု လကိုေ် လျှာကသ်ည့် ပထမဆုးံသရူေဲကာင်းရေဲမလည်း ဖြစ်ေပသည။် သြို့ဖစ၍်သေူလျှာကခ်သ့ဲ ညလ့် မ်းကြောင်းအတငိုးနောကက်လကိုြ်ပီး ချတီက်ြကရန် ကကူီးလငူယအ်ေ ယာ က် တငိုးကို သမူကယို တ်ငိုစနိေ်ခ်ါလျှကရ်ှေိ ပသည။်(၂၁)နစှမ်ျှသာရှေိ သးသည့် မကင်းဘွုိငသ်ည်အ ကယ၍်သာ ဆကလ်က် အ သကရ်ငြှ်ပီး နငို င်ေံရးနငှ့် အမျုိးသားရေးတက့ိုို စမွ်းစမွ်းတမေံဆာ င ရ်ကွပ်ါက နှောင် တချနိခ်ျနိတ်ငွ် KSDF နငှက့် ကူီး ပြညသ်မျူားသာမကဘဲ နငို င်ေံတာ အ်တကွ် အမနှတ်ကယအ်ားကိးုရမည့် ခေါင်းဆောင် တဦး ဖြစလ်ာမ ည မ်ှာမလွေှဲ ပ။
သြို့ဖစ၍်သမူအပေါ်လေးစားသတူငိုးအနေဖြင့် သမူချနရ်စခ်ေ့ဲ သာ အမေအွှနစှမ်ျားကထို မိ်းသိမ်းရမည်ြဖစသ်ည။် ထအို မွေ မှာရွှေေင၊ွ ကျောကမ်ျကရ်တနာတြို့ဖငဝ့် ယသ်၍ူမရနငိုေ် သာ တငိုးပြညန်ငှလ့်ူမျုိးအတကွ် ကယို ၊်နှုတ၊်နလှုးံသုံးပါး တအ့ိုား ရ က်ေရာစွာဆကက်ပ် ပေးလှူခြင်းပင်ြဖစသ်ည။် ထအို မေအွနစှမ်ျားကို ထနိ်းသမိ်းလသိုတိုင်းသညလ်ည။် သမူကသ့ဲ့ို သမ ငိုးပေးတာဝနက်အို သကထ်ကဆ်ုးံကျေပနွစ်ွာ ထမ်းဆောငမ်သှာ ထအို မေအွနစှမ်ျားအား ထနိ်းသမိ်းရာ ကျမည်ြဖစ်ြပီး သမ့ို သှာ သူမ က သ့ဲြို့မငြ့်မတသ်ည့် အာဇာနညသ်ရူေဲကာင်းအဖြစ် သတမ်တြှ်ခင်းခရံမည်ြဖစသ်ညအ့် ပြင် ကျနပ်ု တ်ြို့မနမ်ာ နငို င်တံငွ်
စစမ်နှေ်သာ
ဒမီကို ရေစထီနွ်းကားပြီး
ထဒို မီကို ရေစစီနစ်ေအာက၌်
တငိုးရင်းသားလမျူုိး
လည်းခေတမ်ှီတိးုတက်ြပီး ငြမိ်းချမ်းသာယာသော ပြည်ေထာ င စ်ြုမနမ်ာနငို င်ေံတာ က်ို တည်ေဆာ ကန်ငိုြ်က မည်ြဖစသ်ည။် သြို့ဖစ၍်မကင်းဘွုိင် ကယွ် လနွအ်နစိ္စေ ရာက်ရခြင်းသည် မမိတို့KSDF အဖအ့ွဲ စည်းအတွကသ်ာ မ ကဘဲ ကကူီးပြညသ်ူ လထူတုရပလ်ုးံအတကွ် အစားထိးုမရသောဆုးံရှးုံမြှုကီးပင်ြဖစသ်ညဟ်ု ကျနောတ်အ့ို နေနဲ့ ခငို မ်ာစွာ ဆပုက်ငို ယ်ြုံကည်ြက ပေသည။် ထေ့ို ကြာငလ့် ည်း ကျနောတ်သ့ို ည် သမူ၏ ပေးဆပ်မမျှုားအား ချီးကျူးပြောဆြိုကယသုာံမဟတုဘ်ဲ သမူကသ့ဲ့ို အ သကထ်ကဆ်ုးံ ဒမီကို ရေစနီငှ့် အမျုိးသားရေးအတကွ် တကိုပဝွဲ ငမ်သှာ သမူအပေါ် လေးစားဂဏြုပုရာကျမည်ြဖစသ်ည။် သမ့ို သှာ ကျွနပ်ု တ်သ့ို ည် သွားလေသူ မကင်းဘွုိင၏်ပေးဆပမ်အှုေ ပါ် အ သအိမတြှ်ပုရာကျမည် ဖြစသ်ညအ့် ပြင် မမိတိ၏့ို အမျုိးသားရေးတာဝနမ်ျားကလို ည်း ကျေပနွစ်ွာထမ်းဆောငရ်ာကျမည် ဖြစ်ေပသည။် ---------------------------ဘရုားရငှ၏်ရ င်ခ ငွေ်တာ ၌်ငြ မိ်းချမ်းပျောရ်ငွှစ်ွာ ထာဝရအပန်းဖြေနငို ပ်ါစေ။ L.Kuki
NATIONAL LEAGUE FOR DEMOCRACY(LIBERATEDAREA) KOREABRANCH 65-9,Simkong-2 Dong,Wonmi-gu,Buchon Shi, Dyung-gi Do,420-012,
ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏလ်ွှာ ၂၀၀၄ခနုစှ၊်သြဂတုလ်(၆)ရက်ေနတ့  ငွ်
ကကူီးတငိုးရင်းသူ
ကကီူးကျောင်းသားများ
ဒကီကို ရကတ်စတ်ပဦ်း
(ဗမာပြည)် Kuki Students’ Democratic Front(KSDF)၏ ဘဏ္ဍာရေးမှုး၊ Kuki Women Human Rights Organisation (KWHRO) တာဝနခ်ံ အသက(် ၂၁)နစှ် Miss Vahneikim(Kimboi)သည် အမြိမနမ်ာနငို င်ေံတာန် ငှ့် တငိုးရင်းသားများ ဒမီကို ရေစနီငှ့် လအ့ူ ခငွအ့် ရေးများ ပြနလ်ညရ်ရှေိ ရးအတကွ် အ ဘကဘ်ကမ်တှာဝ န ထ်မ်းဆောင်ေနရင်း ဘဝတပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားသညက်ို ကြားသရိပါသဖြင့် ကျနောမ်ျား အမျုိးသားဒမီကို ရေစအီဖခ့ျွဲူပ(် လတ်ွမြောကန်ယ်ေမြ) ကိုးရီးယား ဌာနခကွဲ မသိားစနုငှအ့် တူ ထပတ်ထူပမ်ျှ ဝမ်းနည်းမပိါသည။်
ဘဝတပါးသက့ိုးပြောင်းသွားသော Miss Vahneikim (Kimboi)သည် နောငဘ်ဝ ဆကတ်ငိုးဆကတ်ငိုးဒမီကို ရေစီ နငှလ့် အ့ူ ခငွအ့် ရေးပျကစ်ီးယယွိုင်းနေသော စစ်အာဏာရငှလ်က်ေအာကန်ငှ့် မတရားအဖနိပှိ ခ်နံငို င်အံသငိုးအဝငိုးမလှတွ် မြောကန်ငိုြ်ပီး ကောင်းရာသဂုတသို့ ရောကရ်နှိ ငိုစေရန် ဆေုတာင်းမေတ္တာပလ့ို ကို ပ်ါသည။် မပြီးဆုးံသေးသော ဒမီကို ရေစအီရေးတောပ်ုံ မချုအောင်ြမငမ်ည၊် တငိုးရင်းသားတို့၏ အခငွအ့် ရေးများ မချုအောင်ြမငမ်ည။် စစအ်ာဏ ရ ငှစ်နစ် မချကျဆုးံမည် အ လပုအ်မှေုဆာငအ်ဖွဲ့ အမျုိးသားဒမီကို ရေစအီဖွဲ့ချူပ(် လတွေ်ြ မာက်န ယေ် မြ) ကိးုရီးယားဌာနခွဲ နေစ့ွဲ ။ ၈၊သြဂုတလ်၊ ၂၀၀၄
STUDENTS & YOUTH CONGRESS OF BURMA H 3/65,Vikaspuri, New Delhi- 110018. INDIA Tel: 91-11-25571375 E-mail: sycbi@vsnl.net
ရေဲမကင်းဘွုိငအ်ား ဂ ဏုလ်ွှေပးပြို့ခင်း ရေဲမ-ကင်းဘွုိင် သင သ်ည် မြ န မ်ာပြညရ်ရှေိ ရးနငှ့် တငိုးရင်းသားညကီမျိုား အချင်းချင်းတန်းတေူရးအတကွ် သင သ်ကရ်ငှေ်န ထငိုစဥက်ာ လ တစ ခ်လုးံစမွ်းစမွ်းတမံ ကြိုးပမ်းမမျှုားအား ကျွနပ်ု တ့်ို SYCBသဖလ့ွဲုးံမှ အထူးလေးစားအသအိမတြှ်ပုအပပ်ါ သည။် SYCBလပှုရ်ှားမမျှုားတငွ် သင ၏်ရိးုသားမနှုငှ့် တက်ြကစွာပါဝငမ်မျှုားသည် ကျွနပ်ု တ်အ့ိုားလုးံအားထာဝရသတရိအတု ယဖူယွသ်ာဖြ စေ် ပသည။် ဒမီကို ရေစတီကို ပ်ဝွဲ င်ရင်း ကျဆုးံသွားခေ့ဲ သာ သငအ့်ား ကျွနပ်ု တ့်ိုSYCBအနေဖြင့် ဒမီကို ရေစီ သရူေဲကာင်းအဖြစ် အနာဂတမ်ျုိးဆကသ်စမ်ျားထသံို့ လကဆ်ငက့် မ်းသယ်ေဆာ ငေ် စရန် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ေကြာင်း အလေးအနက် အဓဌိာန်ြပုအပပ်ါသည။် သြို့ဖစ၍်ကျနပ်ု တ်ြို့မနမ်ာနငို င်ံ ကျောင်းသားလငူယမ်ျားကန်ွကရက(် SYCB)သည် ဤဂဏြုပုလွှာဖြင့် သင၏်ရိးုသားမ၊ှုတက်ြကမွနှုငှ့် အနစှန်ာခေံ ဆာငရ်ကွမ်တှုအ့ိုား မတှတ်မ်းတင် ဂဏြုပုအပပ်ါသည။် သင ၏်လပုေ်ဖာက်ငို ဖ်က် ရေဲ ဘာ မ်ျား မြနမ်ာန ငို င်ံ ကျောင်းသားလငူယမ်ျား ကနွက်ရက(် SYCB)
ကကူီးအမျုိးသမီးများ လအ့ူ ခငွအ့် ရေး အစည်းအရုးံ(KWHRO)မှ မဝနိမက်င်း(ကင်းဘွုိင်) သြဂတုလ်၊၆ ရ ကေ် နက့  ရတုတ်ရ က် ကယွလ်နွသ်ွားကြောင်းသရိသည့်အတကွ် မမိတိအ့ို နေနငှ့် မသိားစနုငှ့် ထပတ်ထူပမ်ျှ ဝမ်းနည်းကျေကရွဲ ပါ သည။် ကင်းဘွုိငက်ယွ် လနွသ်ွားခြင်းသည။် ကငဘ်ွုိင၏်မသိားစနုငှ့် KWHROတအ့ို တကွသ်ာ မ ကဘဲ မ မိတို့ WLB အတကွ် အားထားရမညအ့် နာဂတ်ေခါင်းဆောငတ်စဦ်း ဆုးံရှးံသွားရခြင်းဖြစပ်ါသည။် မြနမ်ာန ငို င်တံငွ် ကကူီးပြညသ်လူထူနုငှ့် အမျုိး သမီးထတုရပလ်ုးံ၏
အကျုိးအတကွစ်နွလ့် တွ်
အနစန်ာခြံပီး
စမွ်းစမွ်းတမေံဆာ င ရ်ကွန်ငို မ်ည့်
အဖိးုတနအ်မျုိးသမီး
ခေါင်းဆောငတ်စဦ်းကို ဆုးံရှုးံရသညအ့် တကွ် မမိတိအ့ို နေနငှ့် ယကျူုးံမရနှေမြာတသဖြစမ်ပိါသည။် ကင်းဘွုိင၏်ဖြောင့် မ တသ်ည့် သဘောထားနငှ့် အားကောင်းသညပ့်ူးပေါင်းဆောငရ်ကွမ်တှုက့ိုို မမိတိအ့ို နေနငှ့် အစဥအ်မြဲ ဂဏြုပုမတှတ်မ်း တင သ်ွားမည်ြဖစပ်ါသည။် ကင်းဘွုိင် ကောင်းရာသကုတိ လားပါစေ။ အမျုိးသမီးအဖခ့ျွဲူပ် (မြနမ်ာန ငို င်)ံ WLB ကယို စ်ား သင်းသင်းအောင် တဘွဲ က် အထွေေထွ အ တငွ်းရေးမှုး(၁)
ပြည်ေထာငစ်ု တငိုးရင်းသားများ ဒမီကို ရေစအီဖခ့ျွဲူပ် လတွေ်မြာကန်ယ်ေမြ (UNLD/LA) နငှ့် အမျုိးသားဒမီကို ရေစီ တပ်ေပါင်းစု NDF တမ့ှိုပေးပသ့ို ည့် သဝဏလ်ွှာ သ က္ကရာဇ်ဒမီကို ရေစအီဖခ့ျွဲူပ်
၂၀၀၄ခနုစှ၊်သြဂတုလ်(5)ရက်ေနမ့ှ( လတွေ်ြ မာကန်ယ်ေမြ)UNLD/LA
(၇)ရက်ေနအ့  တငွ်း နငှ့်
ပြည်ေထာင်စ တုငိုးရင်းသားလမျူုိးများ
အမျုိးသားဒမီကို ရေစတီပ်ေပါင်းစု
NDF၏ဦးဆောငမ်ြှုဖင့်
Supporting committee for State Constitutions မှ နယူးဒေလြီမတ့ို ငွက်ျင်းပသော State Constitutions Seminar တငွပ်ါဝငတ်က်ေရာက်ေသာ ကူကီးအမျုိးသမီးကယိုစားလှယ်တစဦ်းဖြစသ်ည့် Miss Vahneikim အသက(် ၂၁)နစှသ်ည် မမျောလ်ငဘ့်ဲဆမီနီာ ကာ လအ တငွ်းတငွ် ကယွလ်နွအ်နစိ္စေ ရာကသ်ွားသညအ့် တကွ် ကျ န ရ်စသ်မူသိားစနုငှအ့် တထူပတ်ူ ထပ မ်ျှ ဝမ်းနည်းကျေကွေဲ ကြာင်း ဝမ်းနည်းသဝဏလ်ွှာ ပေးပအ့ို ပပ်ါသည။် State Constitution Seminar ကျင်းပရေး ကောမ်တီ နေစ့  ၊ွဲ ၇၊၈။၂၀၀၄
ALL BURMA STUDENT LEAGUE CENTRAL COMMITTEE (ABSL) မြန်မာနငို င်လံုးံဆငို ရ်ာ ကျောင်းသားများအဖခ့ျွဲူပ် (ABSL)မှ ရေဲမ ကင်းဘွုိင်အားဂဏြုပုလွှာ ရေဲမ- ကင်းဘွုိင် ရေဲမ
ကင်းဘွုိငသ်ည်
ဒီမ ကို ရေစတီကို ပ်အွဲ တငွ်းမှာ
မမျှောလ်ငဘ့် ကျဲဆုးံရသညအ့် တွက်
ကျွန်ေတာ တ့်ို
မြန်မာနငို င်လုံးဆငို ရ်ာ ကျောင်းသားများအဖခ့ျွဲူပမ်ှ များစွာဝမ်းနည်းကျေကြွဲဖစရ်ပါသည။် ရေဲမ-ကင်းဘွုိင၏်
ရိးုသားမ၊ှုတာဝနယ်လူမို ၊ှု
တာဝန်ေကျ ပ နွလ်မို ၊ှု
ချစ်ြကညစ်ွာပေါင်းသင်း
ဆကဆ်တံတမ်၊ှု
တက်ြကစွာ ဆောငရ်ကွတ်တမ်တှုမ့ှိုာ ကျွနပ်ု တ်အ့ိုားလုံးအတွက် အစဥစ်နံမနူာ ယရူမညအ့် ချကပ်င်ြဖစသ်ည။် တကယိုကောင်းမဆနဘ်ဲ မမိရိရသှိ ည့်အခငွအ့် ရေးများကို အနစှန်ာခစံနွလ့် တွ၍်မမိအိဖအ့ွဲ စည်းနငှ့် မမိအိမျုိးသားရေးအတကွ် လပုေ်ဆာ င ခ်မ့ဲ မျှုားမှာလည်း စနံမနူာကောင်းပင်ြဖစ်ေပသည။် ရေဲမ-ကင်းဘွုိငအ်နေဖြင့် ဤကဲ့သြို့ပုမေူန ထငို ခ်မ့ဲ မျှုားမှာ အနာဂါတအ်တကွအ်လားအလရှေိ သာ တောလ်နှေ်ရးသမားတစဦ်း ဖြစလ်ာမ ည မ်ှာ မလွှေပ။ မညသ်မူညမ်ျှ မလနွဆ်နန်ငိုေ် သာ လမ်းသထ့ိုာဝရထကွခ်ွါသွားသော ရေဲမ ကင်းဘွုိငအ်ား မြနမ်ာန ငို င်လံုးံဆငို ရ်ာ ကျောင်းသားများအဖခ့ျွဲူပ် အနေဖြင့် ဂဏြုပု အလေးပြုနတုဆ်ကလ်ကိုရပေသည။် ဗ ဟေို ကာမ်တီ မြန်မာနငို င်လံုးံဆငို ရ်ာ ကျောင်းသားများအဖခ့ျွဲူပ် ABSL(အနိယ္ဒိ )
ARAKAN LEAGUE FOR DEMOCRACY (EXILE)YOUTH INDIA DG-II, 174-A, Vikaspuri, New Delhi- 110018. INDIA Tel: 90- 11- 28537895, 25510109
မကင်းဘွုိင် ကျဆုးံသွားမအှုပေါ် ALD/Youth (L/A)မှ ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏလ်ွှာပေးပြို့ခင်း ယေ န့ 
မကင်းဘွုိငအ်ား
မသိားစဝုင၊်ပါတီနငှအ့် တူ တက်ြကွေသာ
ဂဏြုပုသညအ့် ခမ်းအနားတငွ်
ထပ တ်ထူပမ်ျှဝမ်းနည်းမေိကြာင်း
ဒမီကို ရေစတီကို ပ်ဝွဲ င်
ပြောကြားလပိုါသည။်
ရေဲမတစဦ်းဖြစသ်ည့်အပြင်
သမူသည်
တခြားလူမှေုရးနငှ့်
မကင်းဘွုိင၏်အ လနွတ်ရာမှ
နငို င်ေံရးနယပ်ယ၊်
ဘာသာရေးများတငွလ်ည်း အလနွတ်ရာတက်ြကစွာ လပှုရ်ှားခသ့ဲူတစဦ်းလည်းဖြစပ်ါသည။် သမူ၏ ဒမီကို ရေစလီပှုရ်ှားမှု များတငွ် တက်ြကစွာပါဝငမ်မျှုားကို ALD/Youth မအှလနွဂ်ဏြုပု မတှတ်မ်းတငရ်ပှိါသည။် ကယွလ်နွသ်ူ မကင်းဘွုိင် ကောင်းရာသဂုတိရောကပ်ါစေ။ ALD-Youth- India ရ ကစ်။ွဲ ၁၄-၁၈-၂၀၀၄
ZOMI STUDENTS’ & YOTH ORGANIZATION ဒေီန၊့ဒရီက် ဒအီချနိဒ်ေီနရာမှာ ပြုလပုတ့်ဲ KSDFမှ သွားလေသူ ရေဲမကင်းဘွုိငအ်ား ဂ ဏြုပုခြင်းအစအီစဥသ့်ို ဇမိုီးကျောင်းသားလငူယအ်ဖမ့ွှဲဤသဝဏလ်ွှာပေးပို့ ဂဏြုပုအပပ်ါသည။် ဒအီစအီစဥဟ်ာ ရေဲမ-ကင်းဘွုိငရ့်ဲ မနြွ်မတ်ေသာ ဂ ဏုသ်က္ခိာ၊ တောကပ်သောစတိဓ်ါ တရ်ငက့်ျကထ်ကသ်နမ်ကှုို ဖောက်ျူးခြင်းဖြစတ်ယလ့်ို ခယံပူါသည။် ရေဲမကင်းဘွုိင် မမျှောလ်ငဘ့်ဲရတုတ်ရ က် ကယွလ်နွ် အနစိ္စေ ရာကခ်ရ့ဲ ခြင်း အတကွ် ZSYO အနေဖြင့် အထူးနှေမြာတမ်းတစွာ ထပတ်ထူပမ်ျှ ခံစားဝမ်းနည်းကြရပါတယ။် ရေဲမ Kimboi လျှောကလ်မှ်းခဲ့တဲ့ သမငိုးကြောင်းဟာ ဘယ်ေတာ မ့အှလဟသြ ဖ စ လ်မိမ့် ညမ်ဟတုပ်ါဘူး။ ကျနရ်စ်
သမူသိားစဝုငမ်ျား KSDFရေဲဘာ မ်ျား၊ဆေမျွုိးသားချင်းများ၊ သူငယခ်ျင်းအပေါင်းအသင်းများနငှ့် သားချင်းမတိသ်ဂဟ င်္ များ အားလုးံကလို ည်း ဘရုားသခငရ့်ဲအလေို တာအ်တငိုး လကခ်နံငို ဖ့်ို ကြိုးစားကြပါစလ့ို့ို အားပေးနစှသ်မိလ့်ျက် ဆမုနွေ်ကာင်း တောင်းလကို ပ်ါသည။် အထူးသဖြင့် အခကအ်ခြဲကီးမားတဲ့ ဒေီနက့ာလမှာ ရေဲမကင်းဘွုိငရ့်ဲ ကယို က်ျိုးစနွေ့် ပးဆပမ်ှု ကြံ့ခငို မ်၊ှု ဇသွဲ တ္တိ ရမှိနှု ငှ့် ကျဆုးံမအှုပေါ် ကျွန်ေတာ တ်အ့ိုားလုးံ အလေးအနကတ်နဘ်ိးုထားသလို သထူမ်းဆောငခ်တ့ဲ့ဲ စစအ်ာဏာရငှစ်နစ် ဆန က့်ျင်ေရး၊ဒီမကို ရေစေီရး
အမျုိးသားရေးတာဝနမ်ျားကို
တကည်လီကည်ီ
ဆကလ်က်ထမ်းဆောငသ်ွားကြပါမယလ့်ို
တငို တ်ညရ်င်း ရေဲမကို ဦးညတွ် ဂဏြုပု အလေးပြုလကို တ်ယ။်တော လ်နှေ်ရးသစ္စာဖြင့် ဗ ဟေို ကာမ်တီ ZSYO(India)
ဝမ်းနည်းကျေကဖွဲ ယွ် သဝဏလ်ွှာ(PYNG) Kuki Students’ Democratic Front (KSDF)၏ ဘဏ္ဍာရေးတာဝနခ်ံ Kuki Women’s Human Rights Organisation(KWHRO)၏ ခေါင်းဆောငတ်စ်ဦးလည်းဖြစသ်ူ Vahneikim(ခေါ်)မကင်းဘွုိင်သည် ၂၀၀၄ခနုစှ၊်သြဂတုလ်(၆)ရက်ေန့ ည(၁၀)နာရီ ၄၅မနိစခ်နတ့် ငွ် ဒေလြီမို့ ဆေးရတုံ စခ်၌ု၉၆ပါး ရောဂါဖြင့် ကယွလ်နွသ်ွားကြောင်းကြားသရိသည အ့် တကွ် ကျနရ်စသ်မူသိားစနုငှအ့် တူ ထပတ်ထူပမ်ျှ အထူးဝမ်းနည်းကျေကပွဲါသည။် Vahneikimခေါ်မကင်းဘွုိငသ်ည်ယခ ကုသ့ဲ အ့ို သက်ငယင်ယ် ရ ယွရ်ယြွ်ဖင့် ဘဝတပါးသက့ိုးပြောင်းသွားခြင်းသည် ကကူီးတစမ်ျုိးသားလုံးအတကွ် ကြီးမားသည့် ဆုးံရှးံမသှုာ မ ကဘဗဲမာပြညရ်ှိ ဒမီကို ရေစေီရးနငှ့် ကယို ပ်ငိုြ်ပဌာန်းခငွ့် လလိုားသော ပြညသ်တူရပလ်ုးံအတကွပ်ါ အ လနြွ်ကီးမားသော ဆုးံရှးံမလှုည်းဖြစသ်ည။် ကင်းဘွိုငက်ျဆုးံမအှုတကွ် မမိတို့ ပလောငလ်ငူယက်နွယ်က်အဖွဲ့(PYNG)နငှ့် ပလောငအ်မျုိးသမီးများ အစည်း အရုးံ (PWO)မှ အထူးဝမ်းနည်းကျေကရွဲ ပါကြောင်း ဤသဝဏ်လွှာကို ပေးပအ့ို ပပ်ါသည။် ကင်းဘွိုင် ရောကရ်ာ သဂုတိ လားပါစေ။ ဗ ဟေို ကာမ်တီ
ဗ ဟေို ကာမ်တီ
ပလောငလ်ငူယမ်ျားကနွယ်က်အဖွဲ့
ပလောငအ်မျုိးသမီးများအဖခ့ျွဲူပ်
ရ ကစ်။ွဲ ၂၀၀၄ခနုစှ၊်သြဂတုလ်(၉)ရက။်
WUNPAWNG JAWNGMA THE RAMMA HPUNG ALL KACHIN STUDENTS AND YOUTH UNION
အသကဆ်ုးံတငိုဒမီိုကရေစတီကို ပ်ဝွဲ ငခ်ေ့ဲ သာ မကင်းဘွုိင်အား ဂဏြုပုသော သဝဏလ်ွှာ မြနမ်ာန ငို င်ံ
ဒီမ ကို ရေစတီကို ပ်ွဲလမ်းခရီးတငွ်
မမိလိမျူုိး
မမိတိငိုးပြညအ်တကွ်
အ သကဆ်ုံးတငို
တကို ပ်ဝွဲ င်
လပှုရ်ှားပါဝင် ထမ်းဆောငခ်ေ့ဲ သာ ကကူီးကျောင်းသားများဒီမကို ရကတ်စတ်ပဦ်းမှ မကင်းဘွုိငသ်ည် ခရစ်ေတာ ၏်ခေါ်တော မ်ြူခင်းခခံသ့ဲ ဖြင့်
မမိေိကျာင်းသားလငူယသ်မဂမ္ဂလှည်း
ဒမီကို ရကတ်စတ်ပဦ်းနငှအ့် တူ
ဝမ်းနည်းကျေကွေဲ ကြာင်းနငှ့် အလင်းပေးသော ကြယတ်ပငြွ့်ပုတက်ျသည့်ပမာ ထငမ်ပိါသည။် မကင်းဘွုိငသ်ည်အ သက် ရငှစ်ဉ်
မမိတ က့ို ကူီးလမျူုိးများအတကွသ်ာမ က
အခြားသောနငို င်ေံရးအဖအ့ွဲ စည်းများတငွ၎င်း၊
ဘာသာရေးတငွ၎င်း၊
လမှူေုရးရာတငွ၎င်းငြီးညြူခင်းမရဘှိဲအပြုးံပန်းဖြင့် ပေးရာတာဝနက်ို ထမ်းဆောငတ်တ်ေသာ မ ကင ဘ်ွုိင၏်သေ ဘာ သဘာဝတရားသည် စနံမနူာ ဖြစခ်ပ့ဲါသည။် သြို့ဖစပ်ါ၍ မကင်းဘွုိငအ်ား ဂ ဏြုပုဂါရဝပြုရင်း ဤသဝဏလ်ွှာကို ပေးပအ့ို ပပ်ါသည။် ဗ ဟေို ကာမ်တီ ကချင်ေကျာင်းသားလငူယသ်မ ဂန္ဂယူးဒေလ၊ီ အနိယ္ဒိ ရ ကစ်။ွဲ ၁၄။၀၈။၂၀၀၄
ရေဲမ-ကင်းဘွုိင၏်ရပုခ်န္ဒာဘေး၌ ရဲဘော် Ngangam ဖတ်ြကားခဲ့သော နတုဆ်ကလ်ွှာ တရ့ို့ဲ ရေဲမ-ကင်းဘွုိင် ငါတေ့ို ပါင်းစြုပီး ဒေီနရာမှာ ငြမိ်းချမ်းလာဖို့ တေ့ို တြွကိုးစားအားထုတ် ခြဲ့ကတယဆ်တိုာအားလုးံအသပိါ ။ တန့ို ငို င်နံငှ့် တလ့ို မျူုိးတေလွတွလ်ပ်ေရးရအောင် တေ့ို တအွသက၊်သွေး၊ချွေးတွေေပးဆပမ်ယလ့်ို တေ့ို တွ ဘရုားသင္ခ ထ်နံငှ့် ငါချစတ်ြဲ့ပညသ်ေူတရွဲ့ ရှေ့မှောကမ်ှာတတ့ို တွေ သစ္စာဆခိုြဲ့ကတယ။် ဒသီစ္စာဟာ ငါတအ့ို တကွအ်ားအင် တြွေဖစလ်ာခဲ့သလို ညရီင်းအစက်ရိုေဲ ဘာ ရေဲ မ အားလုးံစည်းလုးံစွာလကတ်ွကဲာ အာဏာရငှက်ြိုဖိုဖို့ တကို ပ်ဝွဲ င်ေနခတ့ဲ ယ် မ ဟတုလ်ား။ ဒေီတာ လ်နှေ်ရးမပြီးဆုးံသေးပေမဲ့ ကျရာနေရာတာဝန်ေကျ ပ နွစ်ွာ ထမ်းဆောင်ြပီးအသက၊်သေွး၊ချွေးတေရွင်းကာ တာ ဝ နေ် တကွို နင်ေကျပနွစ်ွာထမ်းဆောငလ်ာခ တ့ဲ အ့ဲ တကွ် တအ့ို ဖအ့ွဲားလုးံ မင်းကဂို ဏုယ်ူလို့ မဆုးံဘူးဆတိုာမင်းကို သေိစချငလ်ိုကတ်ာ ။တော လ်နှေ်ရးမပြီးဆုးံသေးပေမဲ့ မင်းနေရာမှာ မင်းတာဝန်ေကျ ပ နွစ်ွာထမ်းဆောငခ်ြဲ့ပီး ဒီမကို ရေစနီငှ့် အမျုိးသားရေးအတကွ် အ သကန်လ့ဲ ခဲတ့ဲ့ဲ မင်းရဲ့အာဂသတ္တိကို တေ့ို တအွသအိမတှမ်ပြုဘေဲနပါမ့လား။ အခချုနိမ်ှာ မင်းရဲ့ ရေဲဘာ ရ်ေဲမဖြစတ့်ဲ ငါတမ့ို င်းရဲ့အလောင်းရှေ့မှာ သစ္စာခြံပီးမပြီးဆုးံသေးတဲ့ တောလ်နှေ်ရးအတကွ် အဆုးံထတိငိုတကို ပ်ွဲ ဝငသ်ွားမယဆ်ိုတဲ့ ဒသီစ္စာစကားလုးံတွေမင်းကိုကြားစေချငလ်ိုကတ်ာ။ အတားအဆီးဘယ်ေလာ ကမ်ျားများ ငါဘယ်ေတာ မှ့နောကမ်ဆတုဘ်ူးဆတို့ဲ မင်းရဲ့စကားလုးံတွေ ငါအလေးမထားခေ့ဲ ပမဲ့ အခေုတာ မ့င်းရဲ့စကားလုးံတေကွေ ဖြာတေ့ာေ့ တာ့ဖြစ်နေတဲ့ ငါရဲ့နလှုးံသားတွေကို ခြေမြွပီး ဇာတိမာနဇ်ာ တေိသွးတွေ ပြညန့် က်ေနတဲ့ ငါရဲ့နလှုးံသားသစက်ို မင်းနိးုဆွေပးလို့ ငါမ့ှာ အမျုိးသားရေးထက် ဘာကမို မှလလိုားတာ မင်းကသိုေိ စချငလ်ကို တ်ာ ။ ဘရုားရငှရ့်ဲရငခ်ငွေ်တာ က်နေ ငါတရ့ိုဲ့သစ္စာ စကားကြိုကားနေမှာပါ။လောကမှာ မေွးဖွားလာတလ့ဲ သူားတွေဟာ တစ်ေနတ့  စခ်ျနိမ်ှာ သေဖေ့ို မွးလာဒါပ။ဲ ဒေီသခြင်း တရားကြောင့် ခြွဲကပေမဲ့ မင်းရဲ့သမလနွဘ်ဝ သာ ယာ လပှပြီး ဘရုားရငှထ်ေံတာ မ်ှာ မြတသ်ခုစရံန် ဆေုခြ ရွင်းမငရ့်ဲနောကဆ်ုးံအချနိမ်ှာ ဝမ်းနည်းကြေကစွဲာ နတုဆ်ကလ်ကို ပ်ါတယ။် မပြီးဆုးံသေးတဲ့ အမျုိးသားရေးအတကွ် ကျ န ရ်စသ်ူ တေ့ို တကွို ယြုံကညမ်အှုပြညန့် ငှ့် စတိခ်ျစေချငတ်ယ။်တော လ်နှေ်ရးအောင်ြမင်ေအာင် တေ့ို တွေဆာင်ရ က်ွပါမယလ့်ို ကတြိပုရင်းမင်းရဲ့လပုေ်ဖာက်ငို ဖ်ကအ်ားလုးံ မင်းရဲ့ဒေီနာက် ဆုးံနေမ့ှာ သစ္စာပြုရင်း မင်းကို နတုဆ်ကခ်ပ့ဲါတယ။်
အကြွေေစာတပ့ဲ န်းလေးတစပ်ငွ့် လုးံဝလုးံဝမမျှောလ်ငခ့် ပ့ဲါ။ ဝမ်းနည်းခြင်းကြေကြွဲခင်းများစွာနဲ့ နှေမြာတသဖြစမ်ပိါတယ။် အမျုိးသားရေး၊လမှူေုရး မပြီးဆုးံသေးတဲ့ တောလ်နှေ်ရးလမ်းခလုတမ်ှာ ကြံကမ္မာရငှိ်းရဲ့ ရကို ခ်တမ်ကှုအမျုိးကောင်းပန်းလေးတပငွ့် ကြေလွငွခ့် ရ့ဲ ပြေီပါ။့ Kimboi ဆတို့ဲ အမျုိးကောင်းပန်းလေးတစပ်ငွ့် ကောငရ်ာ သဂုတလိားပါစေ။ ညမီလေးဖြစ်ေစချငတ့်ဲ တရားမျှတတဲ့လော ကတစ ခ်ုဖြစလ်ာဖို့
ေ တာ လ်နှေ်ရးအတကွ်
ဆကလ်ကတ်ိုကပ်ဝွဲ ငသ်ွားမှာပါ
ကတေိပးပါတယ်
ညမီလေးရေ။ ညမီလေးရဲ့
ေ ပျာစ်ရာသငူယဘ်ဝကို
စနွလ့် တြွ်ပီး
ဒမီကို ရေစအီရေးအတကွ်
အာဏာရငှစ်နစက်ို တက်ို ရ်င်း အနစန်ာခ ရံင်း လမ်းခလုတမ်ှာ မမျောလ်ငဘ့်ဲကြေလွငွခ့်ေဲ့ ပမဲ့ တကယ်ေတာ့ည မီလေးဟာ အမျုိးကောင်းသမီးတစဦ်းပါ။ KSDFရဲ့ ရေဲမကောင်း တစဦ်းပါ။ တငိုးပြညရ့်ဲရတနာသမီး တစဦ်းပါ။ ညမီလေးခေတမ်ှာ ကျရောကခ်တ့ဲ့ဲ သမငိုးပေးတာဝနက်ို ကျေပနွစ်ွာထမ်းဆောငခ်ပ့ဲါပြ။ီ နြှေ မာတသလနွ်းလသ့ိုာဝမ်းနည်းကြေကွဲ ယကျူုးံမရ ဖြစ်ေပမဲ့ မင်းရဲ့ပေးဆပမ်အှုေ ပါ် သပိက်ဂို ဏုယ်ပူါတယ။် ငါတရ့ို့ဲတောလ်နှေ်ရးကာလတစ်ေလျှာကလ်ုးံ ပေးဆပသ်ေူတွ မနည်းတောပေ့မဲ့ သမငိုးကောငမ်တှတ်ငို က်ို စကို ထ်ခြူဲ့ပီးပါပြ။ီ ညမီလေးကို အမျုိးကောင်းသမီးတေအွများကြီး လအို ပ် နေပါတယ။် ညမီလေးရဲ့အများကောင်းကျုိးအတကွ် စနွလ့် တွ် အနစန်ာခ မံှေုတနွဲ့ ပေးဆပမ်ှေုတအွတကွ် အကြွေေစာတဲ့ ညီမလေး ကောင်းရာသဂုတလိားပါစေ။ ကမံင်း မြန်မာနငို င်လံုးံဆငို ရ်ာ ကျောင်းသားများအဖခ့ျွဲူပ် --------------------------------------------------------------------------------------------------
သရူေဲကာင်းရေဲမ- မကင်းဘွုိင။်
ဖယောင်းတငို ဟ်ာ သကူယို တ်ိုင် အပခူေံလာ င က်ျွမ်းပြီး လောကအလင်းရောငရ်ဖအ့ို တကွသ့်ူခန္ဒာကို မနြှေ မာဘဲ ပေးဆပ်ြပတယ။် အဒဲလီဘိုဲဒက့ို ကူီးလမျူုိးတေရွဲ့ သမငိုးပေးတာဝနက်ို အသကထ်ကဆ်ုးံ ကျေပနွစ်ွာထမ်းဆောငခ်တ့ဲ့ဲ မကင်းဘွုိငရ့်ဲ ရစဲမွ်းသတက္တိ ဒက့ို ကူီးလမျူုိးတေအွတကွ် ဂဏုယ်ူစရာကောင်းတဲ့ သမငိုးမတှတ်ငို အ်ဖြစ် ထာဝရကျနရ်စ် နေပါစေလို့ ………….? Helen- Kuki
ကြံကမ္မာရငိုးကြောင့် ကြေသွားတန့ဲ ငှ်းဆီ
ညမီကင်းဘွုိင် တရ့ို့ဲဘဝဟာ ဖယောင်းလ၊ိုပန်းတစ်ပငွလ့် ပိုါဘ။ဲ ဖယောင်းဆတိုာလောကကအို လင်းပေးရင်း သခ့ူ န္ဒာကြေနွမွ်း စေတာပါပ။ဲ ဒါပေမသ့ဲ ဟူာ လောကကို အလင်းပေးနငို တ်ယ်ညအမှောငက်ဖို ယောင်းက အလင်းပေးသလို ကကူီးလမျူုိးတေရွဲ့ဘဝအမှောငက်ို မင်းအလင်းပေးသွားခြဲ့ပ။ီ ပန်းဆတိုာဥယာဥတ်စခ်အုတကွ် မ ဟတုဘ်ဲ ဒကုသ္ခ ကုအ္ခ ရာအားလုးံ နေရာဝငယ်လူာခ တ့ဲ ယ။် အခအုချနိမ်ှာအချနိမ်တနဘ်ဲ ကြံကမ္မာရငိုးကြောင့် ကြေချွနိမ်တန ဘ်ြေဲ ကသွားပေမဲ့ မငဟ်ာ ကကူီး လမျူုိးတေရွဲ့ ညအမှောငက်ို ဖြခို ငွ်းတဲ့ ဖယောင်းလပို ။ဲ ငါတို့လည်းမင်းလဘိုဲတာဝန်ေကျ ပ နွပ်ါစေလို့ -----------။ N-Kuki
လမှ်း။
။ တခေု သာ ကလ အတော အ တငွမ်ှာ ပေးဆပသ်ွားပြီး မပြီးပျက်ေသးတခ့ဲ ရီးလမှ်းရင်း ရငဆ်ငိုြ်ကုံတေရ့ွ အနာဂတမ့်ဲ
ဘဝ ကနို င်ေလျှာကလ်မှ်းခြဲ့ပ။ီ
ဒတ့ို တေရွာ သကပ်နသ်ာ
လကတ်ြွဲကရင်
အောင်ြမငမ်ှေုတထွပတ်လလဲ လငွထ့်ြူကမှာ
ဧ ကန ပ်င။် ပျောရ်ငွတ်က့ဲ မ္ဘာဟာ တကယဘ်ဲအပိမ်ကဆ်ိုးတွေက လမွ်းမိးုသမိ်းပကို လ်ကိုြ်ခင်းကို သလိကို ရ်တအ့ဲ ချနိမ်ှာ လကတ်ွေဲ ဖာတ်မ့ျိုားအတကွ် များစွာ ဆုးံရှးံနစန်ာရပါတယ။် ဖြစစ်ဥတ်စခ်လုးံအပေါ် ကြညရ့်ှေု ပမဲ့ ယြုံကညစ်ရာဘာ တခ မှု ကျွန်ေတာ မ်ေ တခ့ွြဲ့ပမီို့ မအြံ့သနငို ခ်ပ့ဲါ။ အြံ့သမတိဲ့ အရာတခကုေ တာ့အ ဒဲေီနည့  ရုးံကို ကျွန်ေတာ မ်လာဖြစတ်အ့ဲ ဖြစပ်ါ ။ တကယ်ေတာ လ့တူငိုးဟာမေွးဖွားပြီးရင်ေသခြင်းတရား ကေို လျှာကလ်မှ်းရစမြမဲို့ လျှောကလ်မှ်းသွားတဲ့ မကင်းဘွုိင်ေလး ဘရုားရငှရ့်ဲအရပိေ်အာကမ်ှာ ထာဝရကနိ်းဝပ် နေပါစေ။ရောကရ်ရှိာအရပ၌်ေ ပျာရ်ငြွှ်ခင်း၊ငြမိ်းသက်ြခင်းများနငှ့် ပြညဝ့် နငို ပ်ါစေ။ မင်းရဲ့လပုေ်ဖာက်ငို ဘ်က၊် တင ထ်န်
လမျူုိးရဲ့တာဝန် လောကရဲ့သဘာဝသဘောအရ မခချွဲင်ေပမဲ့ တတ့ို တေခွခွဲ ရ့ဲ ပြီ မမဟာကျွန်ေတာတ်လ့ို မျူုိးရဲ့ ရေဲမ တစေ် ယာက် အနေနဲ့ တာဝန်ေတကွို ကျေပနွစ်ွာထမ်းဆောငန်ငို ခ်သ့ဲ ပူါ။ ကျွန်ေတာ တ်က့ို ကူီးလမျူိုးအတွက် အသကက်စို တေးပြီး တာဝနထ်မ်းဆောငန်ငို ခ်တ့ဲ အ့ဲ တကွ် ဂဏုယ်ပူါတယ။် ကျွန်ေတာ တ်က့ို ကူီးလမျူုိးများအတက်ွတော လ်နှေ်ရးကာလတစ်ေလျှာကလ်ုးံ အနစန်ာခခြံဲ့ပီး အသက်ေပးဆပခ်သ့ဲေူ တွ အများကြီးရှေိ ပမဲ့ မမရဲ့အသက်ေပးမဟှုာ ထူးခြားပြီး လေးစားဂဏုယ်ဖူယွေ်ကာင်းပါတယ။် မမဟာတောလ်နှေ်ရးကာလ မပြီးဆုးံခင် ကျဆုးံခြင်းသို့ ရောက်ေပမဲ့ မမဟာတာဝန်ေကျ တသ့ဲ ရူေဲကာင်း ရေဲမတစ်ေယာ ကပ်ါ။ မမထားရစက်ျနရ်စခ်တ့ဲ့ဲ တာ ဝ နေ် တကွဆို ကလ်က်ြပီး ကျွန်ေတာ တ့်ို KSDFက အသကပေး ကြိုးစားသွားမှာလို့ ကတခိလျှံက…်……? မမရဲ့မောင်ေလး
ကကူီးသမငိုး စာမျကန်ှာသစဖ်ငွလ့် စှသ်ူ KSDF ရေဲမ Kimboi ရယ်..။
နြှေ မာတသလနွ်းလသ့ိုာဝမ်းနည်းကြေကယွဲ ကျူုးံမရဖြစ်ေပမဲ့ မင်းရဲ့ပေးဆပမ်အှုေ ပါ် သပိက်ို
ဂဏုယ်ပူါတယ။် မင်းရဲ့ကိုယ်ကျုိးစနွအ့် နစန်ာခမံ၊ှုသစ္စာရမှိုတာဝနသ်တိတမ်ှေုတွေကြာင့် သေဆုးံသေူတမွနည်းတောတဲ့တော လ်နှေ်ရး
တစေ် လျှာကလ်ုးံမှာ
မင်းဟာအသိအမတြှ်ပုအခရံဆုးံလို့
သတမ်တှန်ငို ပ်ါတယ။်
ဒအီဖြစက်ို
မင်းကယိုတငိုသခိငွမ့် ရပေမဲ့ ကျနရ်စသ်ူ မင်းရဲ့ဆေမျွုိးအသငိုးအဝငိုးများနငှတ့် ကွ လပုေ်ဖာက်ငို ဖ်ကမ်ျားသာမကဘဲ ကကူီးတမျုိးသား လုးံအတကွ် ထာဝရဂဏုယ်ူစရာဖြစ်ေစခြဲ့ပ။ီ မင်းရဲ့ဘဝနေဝငခ်ျနိ် တေို တာင်းလှေပမလ့ဲ ည်း ငါအ့နေနဲ့ အမြငြ့်မတဆ်ုးံ လသ့ို တမ်တှထ်ားတဲ့ တရားမျှတရေးနငှ့် ငြမိ်းချမ်းရေးအတက်ွနောကဆ်ုးံထကွသ်ကအ်ထိ တကို ပ်ဝွဲ င် ခလ့ဲ ပ့ိုါဘ။ဲ တကယ်ေတာ မ့င်းဟာ ကကူီးလမျူုိးများအတကွ် သမ ငိုးစာမျကန်ှာသစက်ို ဖငွလ့် စှေ်ပးလကိုြ်ခင်းပြဲဖစတ်ယလ့်ို ငါတို့ အနေနငှ့် သတမ်တှလ်ကိုြ်ပ။ီ Nagang Letlam
လမင်းမျကရ်ည် လောကကို ခေတခ္တဏလာလညတ်(ဲ့ Kimboi) တတ့ို တွေ မခချွဲင်ေပမဲ့ ကြံကမ္မာကြောင့် ခြွဲကရပြ။ီ ခြွဲကပြန်ေတာ လ့ည်း ငါတK့ို SDF မသိားစမုအှမြအဲမတှရ်မှာပါ။ စန္ဒာလမင်းလဘိုဲအမြတဲမ်းပြုးံရငွှေ်နတဲ့ မင်းရဲ့မျကန်ှာဟာ နက်ြဖနဆ်ိးုဆိုတဲ့တယြွ်ငစိရာ ဝေဒနာလည်းရငထ်မှဲာ စိးုစမျှိ မရဘှိူးဆိုတာ ငါယြုံကညပ်ါတယ။် Kimboi မင်းဟာ လမှူေုရး၊ဘာသာရေး၊နင်ို င်ေံရးတေနွငှ့် အဖကဖ်က်ြပညစ့် တုံ အ့ဲ တကွ် မင်းရဲ့လပုေ်ဖာက်ငို ဖ်က် ရေဲ ဘာ ရ်ေဲမတေနွငှတ့် ကွKSDF မသိားစဝုငအ်ားလုးံကျရတမ့ျဲကရ်ညဟ်ာ ထကို တ်နလ်ပှါတယ။် အ တက္တင်းပြီး၊မာန်မာနကင်းတဲ့ချစ်စရာစရကိုေ် တဟွာ တတ့ို တေအွတကွ် ဂဏုယ်စူရာပါ။ Kimboi ဦးကောင်းသန်က့  ကျဆုးံမမျှုားသည် အောင်ြမင်ြခင်းရဲ့မတှတ်ငို မ်ျားဖြစတ်ယဆ်တို့ဲအတငိုး ဒတ့ို တေဟွာ တစေ် နေ့  တာေ့ အာင်ြမငလ်ာမှာပါ ဒK့ို SDF ရဲ့ကျောကမ်ျ ကရ်တနာ ဆုးံရှးံလို့ တတ့ို တေလွည်း နှေမြာတမ်းတ မပိ်ါတယ။် မပြီးဆုးံသေးသော သမငိုးပေးတာဝနက်ို မင်းကယို စ်ား KSDF မသိားစေုတလွပုေ်ဆာ င တ်ာကို ခရစ်ေတာ ရ့်ဲရငခ်ငွက်နေ ကြညြ့်ပီးကျေနပပ်ါလို့ တောင်းဆေုချွရင်း ဆန္ဒြပုအပပ်ါတယ။် ကျ န ရ်စသ်ူ(KSDF) မှ
ယြုံကညမ်ှု အချနိမ်ဟတု၊်အခါမဟတုမ်ှာ ကင်းဘွုိငရ့်ဲ သတင်းကို ကြားလကို ရ်ပေမဲ့ ငါမယဘုံူး။ ဒါမဖြစန်ငို တ်က့ဲ စိဘ္စ ယသ်ူ ပြောပြော ငါမယခုံ ဘ့ဲူး။ ဒါပေမလ့ဲ က်ေတက့ျွကျမြငလ်ကိုေ် တာ့ကင ဘ်ွုိင် နငဘ်ာကြောငလ့် ၊ဲဘာအတကွလ်ည်းနငရ့့်ဲ ပ တဝ်န်းကျငန်င့ဲါတမ့ှိုာ ဒကု္ခေ ရာက်ေနချနိမ်ှာ နငပ်စသ်ွာရကတ်ယလ့်ို ငါလည်းလကလ်မှ်းမီသလောက် မတိေ်ဆွေတဆွီ ချကခ်ျင်း အကြောင်းကြာပေမဲ့ ဘယသ်မှူ ငါမ့ယြုံကဘူး။ တကယ်ေတာ့န င ဟ်ာ အောင်ြမငစ်ွာ ဆတုခ်ွာခြင်းနငှအ့် တူ
ငါတတ့ို တေအွပေါ်မှာ အနငို ယ်သွူားခြဲ့ပလီပ့ိုဲငါယြုံကညတ်ယ။် မ သစိတိက်ညမီအရင်းတစ်ေယကလ်ို မေွးဖွားမခိတ့ဲ့ဲ နင့်ရဲ့အစက်ို အောငဆ်န်းလင်း
တာဝန်ကျေသူ လေူသပေမဲ့
နာမညမ်ေ သတာ
အာဇာနညပ်ဲ
ဆတို့ဲစကားအတငိုး
မင်းဟာငါတရ့ို့ဲမထမဦးဆုးံသော
အာဇာနည်ြဖစခ်တ့ဲ ယ။် အကြမ်းဖကမ်ကှုို ဆနက့်ျငရ်င်းမင်းရဲ့ နလှုးံသားကို လကန်ကသ်ဖယွ် အသုးံပြုခတ့ဲ ယ။် ဒါတေဟွာ အနာဂါတက်ူကီးလမျူိုးအားလုံးအတကွပ်ါ ။ အ မိေြ မ လ တွေ်မြာကရ်နအ်တကွ် အ သက်ေပးသွားတအ့ဲာဇာနညမ်ျားရဲ့အရိးုကိုတော င လ်ပုံ မုံ ယဆ်ရို င်
ေ အာကဆ်ုးံမှာရှိနေတဲ့
အာဇာနညအ်ရိးုပ။ဲ
မင်းရဲ့ကယို က်ျုိးစနွတ့် ကို ပ်ဟွဲာ
ကြားသတူငိုးမချီးမမွ်းဘမဲနေနငိုြ်ကဘူး။ နငို ရ်ာစား အဓမ္မေ လာကကြီးထဲမှာ အများပြညသ်အူတကွ် အ သကစ်တေးသွားတဲ့ မင်းရဲ့အာဇာနညစ်တိဓ်ါ တက်ို ငါအရမ်းချီးကျုးမတိယ။် စစအ်ာဏာရငှအ်ပုစ်ိးုတဲ့ စနစဆ်ိးုအောကမ်ှာ ဒူးမထောကလ်ကမ်မြောကပ်ဲသေတအ့ဲ ထတိကို ပ်ွဲ ဝငသ်ွားတမ့ဲ င်းရဲ့အာဇာနညသ်တဟ္တိာပြောင်မြောကလ်ပှါတယ။် သမငိုးပေးတာဝနက်ို နငှေ်ကျ ပ နွစ်ွာထမ်းဆောင်ြပီးပြ။ီ မင်းရဲ့မနှက်န်တဲ့ နယိာ မတေဟွာ ကျ န ရ်စတ့်ဲငါတေ့ို တကွို သလံကို အ်မိေ်မြှာငလ်ို အမြပဲလဲမ်းပြပေးနေပါတယ။် KSDFရှိ နေသမျှ
မင်းရဲ့သမငိုးဟာ
ထာ ဝ ရ တည ရ်ှေိ စရမယ။်
ငါတထ့ို မှဲာမင်းဟာ
သမ ငိုးပေးတာဝနက်ို
ေ ကျ ပ နွတ်ပ့ဲ ထမဆုးံ
အာဇာနညရ်ေဲမပါ။ ငါလည်းမင်းလို သမငိုးပေးတာဝနက်ို ကျေပနွန်ငိုေ် အာင်ြကိုးစားရဦးမယ။် တတ့ို တွေ ဘရုားရငှရ့်ဲ ရငခ်ငွမ်ှာ ပြနဆ်ဘုံ့ို ဆေုတာင်းရင်း။ မင်းရဲ့အချစဆ်ုးံ သငူယခ်ျင်းဖြစတ့်ဲ Mangneo
အကြွေေစာတသ့ဲ ငူယခ်ျင်းအတကွ် သငူယခ်ျင်း Kimboiရေ တတ့ို တေဟွာ ဘယက်ြံကမ္မာကြောင့် ဒေီလာကကြီးထလဲာ ဆေုံ တြွ့ကတာလဲ သူငယခ်ျင်း ရဲ့ ခငမ်ငတ်တတ်စ့ဲ တိ၊်ပျောရ်ငွှတ်တတ်စ့ဲ တိ၊် သဘောကောင်းတစ့ဲ တိေ်တအွပေါ်မှာ အတတိက်ို အတတိမ်ှာ ချနမ်ထားနငို တ့်ဲ ဒက့ို တော့ အမြသဲတရိနေမှာပါ။ အကြွေေစာတဲ့ သူငယခ်ျင်းရဲ့ကြံကမ္မာကို ဒဘ့ို ယ်လမို တှားနငို ခ်ငွမ့် ရဘှိူး။ ဒါပေမဲ့ ဒမ့ိုာကြီးမားတဲ့ မျောလ်ငခ့်ျကတ်စခ်ရုတှိာကတော့ တတ့ို တွေ တစ်ေနေ့  နြ့ကရင် ဒယ့ိုြုံကညတ်အ့ဲ ဖ ဘရုားရဲ့အမိေ်တာ မ်ှာ ပြနဆ်ြုံကမယလ့်ို မျောလ်ငခ့်ျက်ြဖင့်-----ကျ န ရ်စသ်ူ နငရ့့်ဲ Frida(or)Huai
ပါဝါ ၂၁ သတ့ို မ်းတခြင်း
ဒကီမ္ဘာကြီးထဲ ခဏလေးသာ ခေို နခငွရ့် ခသ့ဲေူ ရ။ မင်းရဲ့ဘဝနေဝငခ်ျနိေ်နာကဆ်ုးံ စာမျကန်ှာလေးဖြစတ်ညမ်ဟှုာ ကျ န ရ်စ် သတူို့(KSDF)မသိားစအုတကွ် ဘဝမှာမေမ့ရနငို တ့်ဲ အထနိာဆုးံ ခစာံးမှေုဝဒနာပါပ။ဲ လောကမှာသောကများတာ သထိား ပေမဲ့ တကယတ်မ်းတြွေ့ကုံတော့ မခစာံးနငို ဘ်ူး။ တေဆ့ွနုံ တုဆ်ကခ်ခွဲာခြင်းဆတို့ဲ ဖြစ်ြခင်းတရားဟာ သဘာဝလို့ ဆေို ပမဲ့ အချနိအ်ခါမဟတြုဖစပ်ျ ကခ်ရ့ဲ င် သဘာဝလေ့ို ခ်ါနငို ဦ်းမလား။ ဘာပြဲဖစ်ြဖစဘ်ဝ ကတံရား ပါးပါးလေးသာပိုငဆ်ငိုလာ ခ ရ့ဲ င် မင်းရဲ့ကြံကမ္မာဆိးုအတကွ် နှေမြာတမ်းတခြင်းနငှအ့် တူ ရငထ်မုနာဖြစခ်ရ့ဲ တယ။် ဒါပေမေ့ဲ လ မင်းရဲ့လပုေ်ဆာ င မ်တှုငိုးဟာ မနြွ်မတတ်သ့ဲ ဒ္ဒါစတိန့်ဲ လပုေ်ဆာ င ခ်တ့ဲ ယဆ်တိုာအကြငွ်းမင့ဲါယြုံကည် ပါတယ။် ဟန်ေဆာငမ်ကှုို အလုအယကြှ်ပုကြတဲ့ ဒီခေတ်ြကီးမှာ မင်းဟာအတက္တင်းပြီး ပငွလ့် င်းမနှက်နစ်ွာနဲ့ နောကဆ်ုးံ ထကွသ်ကအ်ထိ တာ ဝ နေ် ကျ ပ နွခ်တ့ဲ အ့ဲ တကွ် များစွာလေးစားမပိါတယ။် အတမ္တိးုထလိငွပ့်ါးမှောကမ်ာနေတဲ့ စရကို မ်ှာ အာဏာရငှေ်ကြာင့် မင်းအရပမ်င်းဌာနေကေို တာင် မခငတ်ယွအ်ားဘဲ ပြညသ်ေူတအွတကွ် အ သကက်ခို င်းပြီး စေတနာ၊ အနစန်ာ ပေါင်းများစွာခရံင်း တောလ်နှေ်ရးကသိုာအဖြော်ပုပြီး ဆမီနီာ တငိုးမှာ အများကောင်းကျုိးအတကွ် တက်ေရာက် အ ဆသို ငွ်းကာ အောင်ြမငမ်သှုရဖကူို ဆောငလ်ျှက် မဝေးတြော့ပြီဖစတ်ပ့ဲ န်းတငို ဆ်သီို့ ရှေ့ဆုးံကနေ ဦးဆောငစ်ြံပသွာတဲ့ မင်းရဲ့သမငိုးပေးတာဝန်ေကျ ပ နွမ်အှုပေါ်
ရေို သလေးစားဂဏုယ်ပူါကြောင်း
ကျ န ရ်ှေိ နသေးတဲ့
တာ ဝ န မ်ျားက(ို မားစ)်
အ သငြွ်ဖင့် အသက်ေပးထမ်းရွက်ြကပါမယလ့်ို---ဆေးထန်
ရဲမေကင်းဘွုိငအ်ပေါ် ဂဏြုပုလွှာ။ ရေဲမကင်းဘွုိင်….ရေဲမရဲ့ အသကရ်ငှလ်ပှုရ်ှားနေစဉ် ဒမီကို ရေစအီတကွ် အ လပုအ်ကျွေးပြုခြဲ့ခင်းကို ငါဂဏြုပုပါ တယ။် ဆကလ်က်၍ငါတ တ့ို ကိုပဝွဲ ငသ်ွားပါမယ။် ဦးသနိ်းဖေ (DPA) ၁၄ ၊ ၈၊၂၀၀၄။
သခုဘုံ မကင်းဘွုိငရ်ယ် လအ့ူ မြငမ်ှာ အကြွေေစာတပ့ဲ န်းပငွေ့် လး။ ဘရုားအမြငမ်ှာတော့ လပှမေွးှကြိုငတ့်ဲ ပန်းပငွေ့် လးကို လောကဒဏ် ကြောင့်
မနမွ်းပါးခင်
စောစောခူးယလူကိုြ်ခင်းပါ။
ေ လာ ကအ တကွေ်ပးဆပခ်သ့ဲ လို
ဘရုားအတါကပ်ါ
ပေးဆပခ်ြဲ့ပမီို့
သုခ ဘ မှုာံ အေးချမ်းစွာနန်းစပါံတော။့ မင်းရဲ့မျုိးစေလေ့းတွေ ဖူးပငွလ့်ာတတ့ဲ စ်ေနမ့ှာ ရရှိာအရပက်အာရကျေနပ်ေနမှာပါ။ မင်းရဲ့ခခွဲာမှေုကြာင့် ဒတ့ို တွေ သငခ်န်းစာတေအွများကြီးရခြဲ့ကတယ။် ကျ န ရ်စသ်ူ မသိားစမျုားအတကွ် တမ့ျိုားBCA က အမြဆဲေုတာင်းပေးနေပါတယ။် Rev. Saunmang
အသကထ်ကဆ်ုးံ
လသူားတစဦ်း မေွးဖွားစဥက်ပျောရ်ငြွှ်ခင်းနငှ၊့်အစပြု
ကြီးထွားလာတော့ ရနုးကနရ်၊ လောကကြီးထဲ
အ သကရ်ငှသ်ွားလာ၊ ဒကု္ခေ တွအပေါင်း၊ မျုိးစြုံကုံရ။
အနာဂတအ်တကွ် ပြ င ဆ်ငခ်ျ ကမ်ျား ကြိုတင်ြပငဆ်ငမ်မြငန်ငို တ့်ဲ
လောကကြီးထဲ ဝိးုတိးုဝါးတား ခြေလမှ်းစခဲ့ ခြေလမှ်းရင်းနဲ့
သေခြင်းတခါံးကို ဖြတ်ေကျာ်ရ ဒ ကု္ခေ တွေပါင်း ငြမိ်းအေးသွား။
သေခြင်းတခါံးဖက၊် ပျောရ်ငြွှ်ခင်း၏ ထာဝရရငခ်ငွ် ကယိုေ် တာ ရ်ငှန်အ့ဲ တူ
ပျောရ်ငြွှ်ငမိသ်က် သခုခစာံး ချမ်းသာရ။
အ ထကက်
ကဗျာအတငိုး
လသူားတစဦ်းဟာ
မေွးဖွားခြင်းရသှိ လို
သေခြင်းဆတိုာရတှိ ယ။်
မကင်းဘွုိငက်ို ကျနပ်ု တ်အ့ို လနွ် နှေမြာလှေပမဲ့ မတားနငို ခ်ဘ့ဲူး။ မကင်းဘွုိငရ့်ဲဘဝကို ကြညြ့်ခင်းအားဖြင့် ကျွနမ်တို့ သငခ်န်း စာကောင်းများစွာရရပှိါတယ။် ဥစ္စာ၊ ရေ၊ွှ ငွေနောကဆ်ုးံ အသကပ်ငလ်ျင် အမမှုထားပအဲသကထ်ကဆ်ုံးက ယိုလ့မျူုိး အ တကွ်
မကင်းဘွုိငရ့်ဲလုပ်ေဆာ င ခ်ျကမ်ျားကို
အရမ်းဘေဲလးစားမပိါတယ။်
ကျနပ်ု တ်က့ျိုနရ်သှိေူ တွ
ေ လာ ကထဲ
ရနုးကနရ်င်းနဲ့ ကယို လ်မျူုိးအတကွ် အ သကထ်ကဆ်ုံးတာဝနယ်ူဆော င ရ်ကွသ်ွားမယလ့်ို ကတဆိခို ပ့ဲါတယ။် Nengboi (KSDF) အနှိုင်းမဲ့
နငှ်းဆနီလီို သတြ္တိပညစ့် တုံ့ဲ လတွလ်ပ်ေရးအတကွ်
ပန်းကောင်းတစပ်ငွ့်
စနွလ့် တွမ်ှေုတွေပးဆပ။်
အြေ ကွေစာလှေပမဲ့
အမျုိးသားရေးအတကွ်
သမ ငိုးပေးတာဝန်
အ သက်ေပးစနွလ့်ှူ
ေ ကျ ပ နွခ်သ့ဲေူ ပ့ါ ။
သအ့ူ ရေးကို
သဟူာ
ဘေးဖယသ်ူ။
အမှောငထ်ကုခိုြွဲပီး
အရောင်ေတွေပးစမွ်းခတ့ဲ့ဲ
ကူကီးလမျူုိးအတကွ် ဓါး
ဖနမ်ီးအမိေ်လးဘ။ဲ
ကူကီးလမျူုိးအတကွ် အား
ကူကီးလမျူုိးအတကွ် --
ငါတေ့ို ဆာငပ်ဒြုဖစတ့်ဲ
အမနှတ်ရားကို ဦးထပိထ်ားတဲ့
Fight for Our People unto Death ကို
သရ့ူ့ဲသစ္စာတရားတေကွ
မလဲမယငိုခငို ခ်ငိုြ်မြဲမဲ
မတရားတအ့ဲ မနိ့် အာဏာဟသူမျှ
အောငလ်ဆံသွဲူပေ့ါ ။
တကယလ်မ့ျိုား ရေဲမကင်းဘွုိင်
ရရဲငြ့်ပတသ်ား
မနငှ်းဆခီငို
စတိဓ်ါ တမ်ျားနငှ့်
မ ယငို မ်လဲ
ချနထ်ား သစ္စာ
အောငလ်ဆွဲ၍
ကမ္ဘာ တညသ်ရွေ့ ။
တကို ပ်ဝွဲ ငခ့်ဲ ။
လတွလ်ပမ်နှုဲ့
ဖြူစငရ်ိးုသား
တရားမျှသမကှုို မြတန်ိးူ
နလှုးံသားနဲ့
ဒါးတစလ်ကလ်ို မေွးဖွား
အနငို မ်ခံ အရှးုံမပေး
ဒါဟာ ငါတအ့ို မျုိးအတကွ်
ဇာတိမာန်ေတွ
အငအ်ားတွေေပ့ါ ။
မသေမွချ
သြော် အခေုတာ့ 
သမျှူဝေခဲ့ ။
အစားထိးုမရတဆ့ဲုးံရှးံမမျှုား
အနာဂတခ်ရီး
အစားထိးုမရတေ့ဲ ကြကမွဲ မျှုား
အစားထိးုမရတဲ့ နစှန်ာမ မျှုား
အစားထိးုမရတဲ့ ----- များ
စတေးခတ့ဲ့ဲ မင်း
ငါတန့ို လှုးံသားတွေ
ရငှ်းလင်း ရှေ့ ဆောင်
ကွေဲ ကြသွားတာ
အလင်းရောင်ေတွ …
နငှသ်မှိာ စိးုတယ် ကငဘ်ွုိင်
ကျမ်းစာ၊ သဝဏလ်ွှာဘာပြဲဖစ်ြဖစ်
ဝေငအှုးံလေ ။ ။
နငှက့်ို ဖတ်ေစချငလ်ကို တ်ာ။
အခေုတာ့
တားဆီးမှေုတွ များပေမဲ့
ညတီအူားနငှ့်
မင်းရဲ့ပရုံ ပိ်
ကျောလ်ွှားမယ် ဆတို့ဲ
ငါတန့ို လှုးံသားတေမွှာ
ရေဲမ-ကင်းဘွုိငရ့်ဲ စကား
ထာဝစဉ် ကနိ်းအောင်း
ငါန့ားဝမှာ
အ တမိ်းအစောင်းမခနံငို ဘ်ူး ။ တကယလ်မ့ျိုား သေခြင်းတရားကို
ငါငါမ်း(ကကူီး)
တားဆီးလို့ ရခရ့ဲ င် ။ ရခရ့ဲ င။် ။
Kimboi longdamsa koma atoh khompi (KSDF)ho kitep nale lhahna thu changho: Kimboi,..။ Leiset chunga chomkhat ilenkhom nasungah inam piu genthei hahsat naho chunga ipohnat jaluvin KSDF minin iki jotkhom uvin pan ilauve. Pathen le mipi maiah thikahanam natong ding in kaki tem utoh kilhona nangin pontho taha pan nani lah jal in namdang ho het thei in ium uve. Adeh in kiloi khom nasunga nagunchu nahole natom lahnaho hi akivet leh nangum lou nunga lhasam leh geochau taha kaum diu kageldoh uvin kalungu alengvai lheh e. Ipi hijongle naleiset hinkho nada lhahto kilhon in, naki ngansena ijakai ah lolhina nanei in Pa kom najontai. Kimboi,.. ။Nampidinganakitah nakeo hilouvin, Pathen houna lam majong nangin neitil khouhat jingjeh uvin, New Delhi’a BCA hihen, KWS hijong leh mijousen nangma kitahna ho ahetchehdiu kaki nem uve. Lhagao lama natom ngaito kilhona golle pai hao pen le mi hom thopen na hijong tuni tahana hung
op hoa kon in hetdoh inaume. Kimboi,..။KSDF in thi chan geiapan lah ding tia pathen leh mipi maiakitepna ineiuto kilhonin nangin vang nasu bukim soh keitai. Na an neh nu khahpen jong Burma gama khonunga kivaipoh dingdan kihoulimna (Constitutional-seminal)apan nalah namun ahi. Tun tahsa hinkhon neidalha jongleu chun, na thilpha boldoh hohi phat khatle Kuki ten ahin phatchom pi teidiu kinepna lentah kanei uve. KSDF thusima namin hi choung jingding ahitai. Chule nang min choung louva KSDF thusim ki jih aum khah le hiche History chu adihlou joh ahi. Koita bang namin chounglou va hinsuo umkhajongle, Pathenin achunga thu atan nadingin natoh khompi hon pathen le mipi maiah kaphong doh uve. Ajehchu KSDF le KWHRO sunga ki phel thenga thichangei’a panla masapenchu nang nahi Van-Pathen in ahe nai. Kimboi …။Tunia neidalhah peh u, tohbang khai hohi kei hon lhasolouva thakalah thei nadiu vin avel lin nalong damsa chungah kaki tem kit uve. Vangam nalhun tengleh, Pa jet lama konin neihin veuvinlang kalhah samnahou le kalhin lalna hou chunga Vantil teto pakai henga panpina le gal jona neihin thumpeh diuvin keiho natoh khompi hon lhahna to thon avelin kahung taokit uve. Hepa…..Kangaitah u Kimboi hi kangaichat lheh vang uvin, nangma koma kichol dodin ahungtai. Pakai in kipah tahanana lamtoding kinem in, kasopiu Kimboi loung damsa mai ah kitep nanei pumin lhahna ka hin nei uve. Pathenin ei umpi jing tao hen. AMEN Office of the KUKI STUDENTS’ DEMOCRATIC FORNTBURMA FIGHT FOR OUR PEOPLE UNTO DEATHHEAD OFFICE : MOREH-795131. MANIPUR. INDIA OBITUARY OF VAHNEIKIM (KImboi)
Miss Vahneikim (Kimboi) the eldest among five sister and two brothers was born to Mr. Jam khotil and Ms.Neitin on the 16th November 1980 at Tamu Myoma Ward No(12) Namphalong, Sagaing Division, Burma. She jointed the Brumese Democratic movement as student activist atavery young age. She left her near and dear ones and her beloved country to join the Kuki Students Democratic Front (KSDF) in its struggle forademocratic Burma and secureajust place for the Kuki people therein. She landed at Delhi on the 5th September 2001 where she becameastaunch democratic activist in exile under the aegis of the Kuki Students Democratic front KSDF. She was an outstanding and exemplary leader who served as the Finance Secretary of the KSDF and the leader in-charge of the Kuki women’s Human Rights Organisation(KWHRO), Delhi Branch. She also becameatireless activist of the Women’s league of Burma (WLB) where she was highly valued for her zealous and enthusiastic participation. Beingadeeply religious woman, the Burma Christian Association (BCA) sought her contribution asaSunday School Teacher where she showed exemplary commitment in imparting Christian religious instruction to the children under her loving care. Right since her childhood, she was God fearing and patriotic. She was deeply pained by the sufferings of her people under the urling military dictatorship of Burma. Her deep sense of patriotism and love for democracy made her to eventually plunge into the noble struggle of the Kuki Student’s democratic Front(KSDF).
In sacrificing her youth toanoble cause close to her heart, She has, as pledge, Fulfilled the motto of the KSDF to “Fight for Our People Unto Death” Miss Vahneikim (Kimboi) left this world for her heavenly abode on 6th Aug, 2004, 10:45 PM, at Deen Dayal Upadhaya Hospital, Delhi due to acute dehydration, the day after her last meal at Maharaja’s Banquet Hall, Janakpuri at New Delhi where she attended the United national League for Democracy (UNLD)Constitutonal Seminar asadelegate of the Kuki Student’s Democratic Front(KSDF). She will always be remembered by her comrades and her people whom she love and served well during her short but momentous career. Her contribution to the cause of the ethnic minority Kuki People of Burma will be written in golden letters in the collective memory of hr people and that of the Kuki Student’s Democratic Front(KSDF). “You Will Always Dwell In Our Hearts As An Exemplary Leader In Our Struggle foraFree BURMA And To Regain the Deprived Rights Of The Kuki People” Central Committee KUKI STUDENTS’ DEMOCRATIC FRONT
Condolence massage from KDSF Korea Branch. Lanu- Vahneikim(Kimboi) KSDF Namle Gama dinga tohkhompi Lanu-Vahneikim(Kimboi) hi ginchat lou pettahaamol lep tahjeh in nasatah in kalungu atong kha lheh e. Nam le Gamdinga thichen geia panlah khom jingding ti kitepna banga thi chan geiagunchu tahaapan lahna hohi suhmil lou ahi poi. Akum hi khangdong cha ahi vangin adamlai sunga Nam le Gam dinga apanlahna hohi thillen thupitah ahin ahi. Kuki Numei holaha vetjuithei pen tah Namle gamdinga ahinkho pedoh LanuVahneikim hi kukite thusima michoung jingding ahitai. Akhat hoi akhantphad laitah hi Nam le Gamadinga ana manchah jing ahito kilhonin ama thusim hi Nampi lunglaia sihtwi banga longjing jeng ding ahitai. Adalhah Inn-sung mite leh atohkhompi loile golho jouse chungah “Pathen” in lung monna phad thei hin bohta hen. Lanu-Vahneikim(Kimboi) Nam le Gamadinga I kitep dungjui un nathichen (natahsa mollechen) gei apan na hinlajou ahitai.”Pathen” in napeh leihinkho chomcha sunga Nam le Gamdinga kilom kin jouse phate cha na jo ahitai. Lungmong in Pa kom anajon masa tan. Nadalhah natoh khompi keima ho jousen nakom ah kitepna kahin nei beu ve. I kitep dungjui un kei hon jong thi chen geia pan ka hinlah cheh diu ahi. Nam le Gam dinga napan lahna ah, meipo kichatna lungthim kahin nei khah ujongle na lhagaovin han sana thu nei hinmop un. Thaset kitah louna lungthim phalou kahin neikhah ujongle na lhagaovin thudih, gunchu le kitahna thu nei hin mop un. Chu le lungtup tohgon molsona ho kahin neitengu jognle na lhagao vin nei hin kipa pi jing tau vin. Nam le Gama dinga hinkho mollep chengeia panlaanana tohna ho chungah, kipapi nale geldohna kahin neijing uve. Jana le ngai lut na sangpen tah in salam kahin peu ve. Lanu- Vahneikim(Kimboi) lungmong selin Pa pathen anglai ah ana choldamtan.
Namle gam dinga natoh khompiu, KSDF(Korea branch)
Condolence Massage from:- Zangneichong Subject:- Kalhauve Kimboi, Epiakahin pataepiakahin chai ding hitam? Kagel phah lou tain nei dalha uvin seiding jong kahe poi. A lungsunga kagel bang hin jih thei leng kati vale, Insunga na umchan ho, neikou na Ogin hohi epiti kahin suhmilding hitam? Na awgin ho, naaw soho ipi ti kasuhmil ding hitam? Ong? Kimboi, na pamai vale, na khangdong hoilai tah in pakom jonin n ache tai. Jat le nama dinga napoh natho. Na hinkho itlou helin na kipedoh in, na nei jousejong itlou in pan nala jing hohi, nang banga numei KUKI te laha panla thei hung um kit ding hinam? Ka thsan poi? Kimboi, namai emsela nanui naho, meseua na um na ho ka suhmil joulou diu ahi tai, Tuchanin jong katahsan naipoi, Iti ka tahsan ding hitam? Neimoh dalhah uhi, Kimboi, kahin lhae, nomselin Chung Pathen kom ah kicholdo tan. Nanu chong.
From : Thonglhun baite Sopi Kimboi(Vahneikim), Mihemte deilhen thei hi lou, hetchetjou jong hi lou, leh deilou pen tah khat(tahsa thina) in nahin phah hijatle nama dingin jong lhaset umtah thil soh ahi. Kimboi nangin jong nangma mimala ding hihen jatle namading hi taleh suhbulhit dinga nangaito thil tampi tah nalunga na vop ding ka kineme. Kimboi, nagollel nathu aumchompi. Nampi ngailut naleh nampia dinga na kipumpehna hi molsong banga kuphut jing dinga nei dalhah pihu ahin, kithang at um kasauve. Jathei ding hilechun, kipa thusei nomna ngait na sanga tamjo ding ahi. Nadeina (purpose) guilhun joulou bangin kingaito louvin, gal joutahapa henglam jon kahi taitin, kigel maitan. Korea aum najat chanpi jousen ka ngailut nao heche letter neocha in kahin phong doh uve. Thong Lhun Baite
From :- Mangneo Neingaidam maitan, Phatseh in kahin geldoh in kahin ngaicha jjinge. Nomma ilenkhomlai u kageldoh jin kalung ahel lhehe. Phat chesa ho milding kiti vangin kalunga ahunglang jie. Idinga neidalhah uham? Banjoma tohding hojong nang jaolou vin ahahsa lheh e. lekou kitthei hileh Katie ong. Kimboi, Pajet lama konin nei hinveu vinlang kamit monau hou neihin seipeh uvin. Nang jaolou vin kama chaljou tapou ve. Nato khompi cheng nang ngainan suntin jan tinin lungleng vaile lungmong
mon kaum taove. Na nule napa tetoh kaki moto tengule ika tidiu hitam? Nagol napai hokoma ipi kasei diu hitam? KSDF meeting, insung maicham niteng somai akimlou jeh in ka lungu anomthei tapoi. Long lheh thei hileh kahin kho phaldinga baisa lhema um kahi. Hibanga chu nachunga itna le ngailutna kanei ahi. Kimboi, masanga ium khomlai uva nadeilou nalung hanna thei kabol kasei ho aum khahle neingaidamin lang, banjoma kanatoh hou amachal theina dingin Pahengah panpina neihin thumpih uvin. KSDF um laiseâ&#x20AC;&#x2122;a nathusim hi kisumang theilou ding chule nangma nahsahlou miaum khah le athusei kila louding ahi. Nahin laija nangman neitah san natoh kilhon na napan mun chu lung lhaiselin kaki lahnai. Kei hojong nikhatle nangkoma kahung diu ahi. Chuteng malai bangin pathen angah nomtah in lengkhom kit taute. Kimboi, tahsaâ&#x20AC;&#x2122;n kimuto thei tahih jongle hen janmang beh in kimuto jing hite ong. Heche phat chu kahin khoa ding kakipa nipen himai tahen. Mangneo- kuki
From: Chochong Adalhah atohkhom piho, Sopi, Ukim umlou thu kajahjeh in keimajong kalung anom molheh e. Ahin lah mihemchu khatvei thiding ahijeh in iba ilo diuham? Adalhah insung mite le atoh khompi jouse taona ah kahin geldoh jing nauve. Keima chochong
CONDOLENCE MASSAGE FROM ALL TRIBAL WOMAN ORGANIZATION CHANDEL DISTRIC Dear friends,
Date: 4th ,Sep 2004
I, Hechin Haokip on behalf of All Tribal Women Organisation Chandel District, express the pain and sorrow for losing Ms. Kimboiâ&#x20AC;&#x2122;s life who was very important for our society. Convey our condolence message to her near dear ones. Let her rest in peace with our heavenly father. Hechin
From : Letlam kuki
Kangai lut tah le kaki neppi tah Kimboi, neidalhah kal hapta khat aval tan ahin ka ngai lutna le ka itna hi amang thei poi. Kamang she leh kamun ka hung khah teng leh ka imu thei ji tapoi. Hijehchun Pathen koma kichol do hijong le chun keima nagang kilhep lungmong theina din kalai natna ho phondohna to thon ka hin lha e. thina kiti hin mihem ho kahalangnei lou danleh, leiset mihem jjousen thina apel theilou hi akihet vangin, hitobang lomma vangsetna ahung soding hi kana gelphapoi. Kei hocheng ika tidiu hitam? Nangin neidalhah jeh uvin natoh khompi jouse an nemo tuidon mon ka umuvin, aki lhemding kabei hel lauve. Hospitalaneidalhah pet tah uchun ka it behsehjeh in lung gimlet lung hemna, ngailut le lungsetna, lungdon tijatna keu hilouvin lung neonale jachatna ijakai khat vei lhunin kachunga ahung lhungin mingol bang in ka motmot in kana ham kha e. kalai anat beseh jeh in na nalup na ah”Najahcha louva kei athi ding bon thilouva nei dalhah ham? Ken athiding le vuidinga kapui nahioi. Keijoh kathi teng nangin neivui tasehatua nei dalhah hi naki oi mong hinam Kimboi? Ken nang hi nikhat leh Kuki nam mitedinga kineppi umtah lamkai khatdinga kapui nah in tua hi iti hen neiti ham? Nanu le napa koma ipi kasei ding hitam?” tin kamot khonkhon tai. Kimboi, naleiset hinkhoa jatle namdinga kimng chadinga kanung najuijeh in nalung nopna ding imacha kabolpeh joupoi. Jat le nam natoh hi ngailutna neilou hon ajojou loudan kasei hochunga tahsan na nanei jeh in nagol neh le chah, nihchen ponsil, jong na otchapoi. Midang ama phatchom nadinga nam mina aki lepaForeignacheding agot vangin nangin nam ngailutna dihtah nanei jeh in hiche hochu lhepnan nalan naki veng dohjouve. Heche she she jong chun KSDF hi ngailutna neitahadoile tup kituptah chepi ahi naphon doh ahijeh in nam lhompen ihivang uvin namdang ho jabol na ichang uve. Hitichun nangin Kuki hi namdang ho het thei din nasa tah in nadomsange. Min hi mihemdinga athupi pen ahidan tunin nangin avelin navetsah kite. Newin Chun Burma gam kumsot tah vai anapoh vangin mipite ana suhgenthei jehin athinin asopi te jengjong kikim louvin jum le ja athoh uve. Nangvang nathil phabol jeh in mijouse aki kimin, lhisoh louva kile koima aum pouve. Nathil phabol jeh in tunin Kuki te keo hilouvin, namchom choma kona tahsale lhagao va kiloikhom, lamkai jousen jong ihung lung hem piu ve. 14/8/2004 nin nangma geldohna kanei uvin lamkai jouse akikimsoh kei e. nangma kajanao vetsahnan(1)minute thipchet in jana kapeuvin chujouvin National antheme in lhahna kanei uve. Nangin athusei nangai nompa Arkan lamkai UThein Phe in “kaloinu Burmese Army hon atha vang uvin kana kap poi, ahin Kimboi thia kakachu kagele kalung adonglheh e” tin mipi maiah aphongdoh e. chule Oxford School neinu aunty Gyi hi 2003aajipa thia aka lou nangin jong na henai. Ahin, nalong chunga kahou limpet in “seidatan ka ngaingampoi” tin kapon aloi jin akap me. KSDFathichan geia na thilpha boljeh in 1988apataleiset hinkho beiho lahaakibol loupe penin napange. Hiche hin miching mithem tahtah hosanga mi mantam nahi aphondoh ahitai. Hiche hochu kavet le kanung najui jeh in genthei hahsatna tamtah toh jongle chun, lung ngamtahakasei thei khat vang aumnai. Hichechu adang hilouvin naphat hoilaitah nampidinga naphaljehatunia loupe le jabolna nachan hohi ahi. Mihem thina chngchangah lainatna kibang jongle jatle nam dinga kiphal theng ho thilonga thu kisei hi thu loupipen ahi dan tunin kichen tahin aki hedohtai. Ajehchu nam natong louchu iti hao hen ching jongle nangbanga jabolna to thoa National antheme kisah peh louding ahi. Nangvang mipi jabol nachan to kilhonin changei in jong nampi nadom sange. Kimboi, hiche hohi kagelle, na itlheh ujongleng navang aphae. Nadalhah kei hocheng joh hi avangse kahi uve. Pathen angsunga konin kangailut naoleh kajabol nahou hi hin muthei tama lechun nalung lhainante tin kakineme. Neida lhahpeh hou tohbangkhai hochunga lung mongmo hih in nalong damsa chungah pakai min panin mipi mai ah kakitem naove. KSDF Motto to kitohanakin jouse nachaia thichanna pan nalah ahi tai.
Imacha bat naneipoi. Ahing nalai kei hojoh hi batnei ka hiuve. Lung lhaisel in pakai heng jonin che maitan Kimboi. Na leiset hin khoa natoh khompi, Nagang Letlam
From : Kakang Kanao Kimboi, tua dalhah ding bepma ibolla kanung nahin jui ham? Nachunga kaki nepna alet behseh jeh in insung kimanchah na jenga jong na dihna hihen namona hijongleh nangjoh kaphoh jin ahin nangin na hetthem jeh in na lung ahang jipoi. Nangin atam joanei kithopi jeh in Namdang hotoh natohkhomna jenga jong kajum nading muntamtah nei huhbit peh jin, chule nang pottho jeh in tasa lam hihen lhagao lam hijongleh midang ho hetthei in ium uve. Tua nang umlou nunga ken kachangsehaipi kabol ding hitam? Bolding kati jouse nangto inabol salhon ahin, chenading kati jousejong nangto iche khomna munjeng ahijeh in, midangin nasumil jongleh ken vang hinkho sunga kasuhmil joudin kaki tahsan jou poi. Nanu le napa, chule insung mi ho koma ipi kaseia iti kaki lhep lungmong ding hitam? Keima nani nu hi natoh ban jopdinga neison mong hi nam? Ipi hitajong leh neida lhah peh kin hohi nang puldou pumpuma kaban jopding himai tante. Leiset nakhol jinaachomcha ikiloi khom nauva nalung natna kasei aum khahleh Pathen minin nei ngaidam inlang lunglhaisel in che maitan. Vangama ikimu kit kah seuvin Pathenin iching jing tau hen. Keima, nani Kakang.
From Mr. Jamsei Kangailut tah Kimboi, Ginchat phah louhelanakhag hoi laitahanei dalhahna chungah na umkhompi naloi napai chengin, Nampia ding hihen lang, lhagao lama ding hijogle insunga neitil khou hi, kageldoh jing uvin lung hemna le lain at nan eito gamtauve. Nanga konin mihem hinkho hi imachaahilou dan jong nei geldoh sah kit uve. Leiset chungahi hahsat nale gentheina chule lungkim umlou namun ahijeh in achemasa nangavangpha jo nahi tai. Nathi nung jeng in jong naloupi naho hi akilang jinge. Nalung tup molsoding kaal ngahlelin kaum jinguve. Mihem bolthei lou Pathen thilgon ahijeh in nahin ngailheh ujongleng lunglhai sellin chema tan. Keima, natoh khompi Jamsei
From :Chuchung Ginchat lou tahin naum lou thu kajan kalung aki dng lheheaw. Sopi Kimboi Nampiading Gamading napan lah na hohi kagel teng naman lut dan kahin mu cheh chehjeng in napa mai vareaw. Sopi Kimboi kahin eit var uve aw. Kuki Numei hodinga vet juithei tah Namle Gam ngailu Nam natong nahi na chu ka hinkho lhung un hin geldoh jingo vinge aw. Sopi Kimboi nada lhahna ngailut na Nam mite, natohhkhompi hole na sopi ten ngailutle it tho in ka hin lhauve. â&#x20AC;&#x153;Pa pathenâ&#x20AC;? anglai ah namleh lung
mongsel in chetan. Namle gamdinga toh bangkhai ho jouse lolhin molsokah in, nang bangin hinkho phal ngamtah in pan hinla jingnau vinge aw. Sopi Kimboi Kukite thusim adeh in KDSF le KWHRO thusima naming le nathusim hi hingjing teiding ahie aw. Na Nam le na Gama dinga na phanlah na hochungah Geldoh naleh hetpehna kahin neijing uve aw. Jana sangpen in Salam kahin peu ve aw. Nam le Gamadinga natoh khompi,
From :seineo Haokip Dear, Pu Letlam le KSDF member jouse, Kimboi chunga nalung hemna le nalai natna phabep nah in sut kamun, koi ahi ka het khah lou vangin mimantam tah ahi kamudoh e. pathen tilou koiman mihem hinkho ajotheilou ihet bang uvin, lainat umlheh jongle iba ilodiu ham? Pathen phatsah ahitia ilah maidiu hitante. Aleiset hin khon kivop khom jong leu hen,aneipan akikou ahitai.Kabol theipen taona ahin Pathen ah kahin taokop jinge. Atohphat na nahin hetsah ho akivetle hithei hen, umsot le KSDF keu hilou va Kuki tedinga ki neppi umtah ahijeh in kenjong kapona mama e. Achainan, Kimboi in nadalhah hi nangle KSDF dingseh hilouva, Kuki te jousedinga vangsetna lentah ahi tin kagele. Pahat chomcha kalhamon na chunga seikhel aum leh Pakai minin nei ngaidam tan. Tahsa le lhagaova nasopiu, seineo Haokip WE CALLED HER KUKI AUNG SAN SUU KYI Late, Miss. Vahneikim daughter of Mr. Zamkhotil from awell known Christian family, I know her for the last seve year and really miss her childhood she know her role what has to be done, and after all she becameawell knownpolitical talented, social and resources person, she love her neighbor as she love herself she treat people equally, she follows what the Bible said God loves has no boundaries and the most unforgettable moment she has is, self respect. She’s always proud of herself being born as Kuki andaChristian relgion and love her nation and people, I was thrillit of her behavior wanted to coied, but can’t, because her role for her people was stuff and dangerous, looking forward her role, we called her Kuki Aung San Suu Kyi, asavaluable person she will be well known in the history of Kukis. So, we, the kuki students respect your struggle for the Kuki nation as well as democracy in Burma. Let your soul rest in peace. Amen…… mangkholen
အထူး ကျေးဇူးတငရ်ြှိခင်း
အမြိမနမ်ာနငို င်အံတငွ်း စစမ်နှေ်သား ဒီမ ကို ရေစနီငှ့် တရားမျှသမမျှုား ရရနှိ ငို ရ်န် တငိုးတပါးတငွ် ဒကုမ္ချုိးစကုိံ ရငဆ်ငို ရ်င်း အာဏာရငှစ်နစက်ို တောလ်နှေ်နစဥ၌်မမိတို့၏ လပုေ်ဖာက်ငို ဘ်ကတ်စဦ်းဖြစသ်ူ ရေဲမ-ကင်းဘွုိင်(Kimboi) သည မ်မျောလ်ငဘ့်ဲရပတ်ရ က်ဘ ရုားရငှ၏်ခေါ်တောမ်ြူခင်းခရံသဖြင့် မမိတိအ့ို နေနငှ့် တကျူုးံမရနငိုေ် လာ က်ေအာင် နှေမြာတသခြင်း၊ ဝမ်းနည်းပေူဆွးခြင်းနငှ့် စတိပ်ျ ကအ်ားငယမ်မျှုားကို ရငဆ်ငို ခ်ြဲ့ကရပါသည။် ဤသေ့ို ရှာငလ်ွဲ၍မရသော ကြံကမ္မာ၏စမီရာံကို
စတိပ်ျ ကအ်ားငယစ်ွာ ရငဆ်ငိုေ် နစဥတ်ငွ် ပြ ညပ်ရောက် ဒမီကို
ရေစနီငှအ့် မျုိးသားရေးအတကွ် တကို ပ်ဝွဲ င်ြကသည့် ဘာသာရေး၊ တောလ်နှေ်ရးအဖအ့ွဲ စည်းအသီးသီးအနေဖြင့် အဖကဖ်က် မအှားပေးကူညခြီဲ့ကသောကြောင့် မကင်းဘွုိင၏်ဈာ ပ န ကစိအ္စား အ ခ ကအ်ခမဲရဘှိေဲ ချာမောစွာ ပြီးမြောကန်ငိုခြဲ့က သည။် ထူးသဖြင့် ဤနာရေးကစိ၌္စ ဗဒီယြီိုဖင့် မတှတ်မ်းတင်ေပးသော MizzimaနငှH့် REIBအဖတ့ွဲ က့ိုို၎င်း၊ဘာသာရေးကစ္စိ များကို ဆောငရ်ကွေ်ပးခသ့ဲ ည့်အပြင် အမိတ်ငိုရာရောက် အားပေးနစှသ်မိခ့်ြဲ့ကသည့် KWS, BCA,DBCFနငှ့် စနေအသင်း တန့ို ငှတ့် ကွ အသင်းသအူသင်းသား အယောကတ်ငိုးက၎င်ိးု ၊ ဒေလေီရာက်ေတာ လ်နှေ်ရးအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ ရေဲဘ်ာရေဲမအားလုးံတက့ို ၎င်ိးု ၊ ဓါတပ်မုံ တှတ်မ်းတင်ေပးခသ့ဲ ည့် ပဂ္ဂုလိမ်ျားအပြင် ကနေဒါ၊ ကိးုရီးယားနငှ့် ထငိုးနငို င်မျာံးမတှဆင့် နစှသ်မိအ့်ားပေးကညြူီကသည့် မဟာမတိ် တောလ်နှေ်ရးအဖအ့ွဲ စည်းအသီးသီးမှ ပဂ္ဂုလိအ်ားလုးံအပေါ် မဖြော်ပနငိုေ် လာ က် အောငအ်ထူးပင်ေကျးဇူးတငရ်ှေိ ကြာင်းဖြော်ပလပိုါသည။် ဤကျေးဇူးတရားတေ့ို ကြာင့် ရောကရ်ာအရပ၌်လအို ငဆ်န္ဒြပညဝ့် ပြီးအရာရာတငွ် အောင်ြမငမ်သှုရဖမျူားကို အကြမြိ်ကမိဆ်တွခ်ူးနငိုြ်ကပါရန်
ဆန္ဒြပဆမုနွေ်ကာင်းတောင်း လျကက်ျနပ်ု တ့်ို
အနေဖြင့် လြူကီးမင်းတ၏့ို စေတနာအား ဤစာတြိုဖင့် မတှတ်မ်းတင် ဂဏြုပုအပပ်ါသည။် ပုံ ကျ န ရ်စသ်ူ KSDFမသိားစမျုား
VANGSET NA CHUNGA KIPA THU PHON NA Hiti dinga kagin chat umlou beh chule manga matdinga jong dei umlou tah inDate:06/08/2004 Friday nin katoh khompiu kalou ngaitah u Miss Vahneikim@Kimboi in aleiset hinkho adalhahapakom ajot tahjeh in mihem hinan ate piding umlou vin lung hemtah le lunglengvai tah in hinkho kamang uvin ahi. Chutobanga mitsin khojin leh kap le mao puma lung lengvai tahaka umlaitah uva hiche (New Delhi)muna um tahsala lhagaova kineppi um tahtah KWS, Delhi lompi, KSO, le lung ngap nathei namlamkai hon nei lhamon uva, ngailut jalla nei hungtom nahou leh sumle pai chana nei kitho piuhi kei hodinga hin khoa suhmil thei leh sahjouthei hoi ahilou kamudoh uvin ahi. Nangho he pina le het them jalla man motah hiu jongleng manthei tah neisou va, mi moltah hiu jongleng mite hetaloupina le jabolna kachan jall uvin amasa penin kaki panao Pakai minin kahin phong uve. Chuleh hiche lekhabu hi Pu. Chuchung le KSDF Korea branch hon sumle pai atodoh jala hung kisuo thei ahijong kahin phongdoh e. Ahin, boinale hahsat na ajatjat kahin tobeuto kilhona hiche lekha hi
suojou louvin phatsot tah ka geisang khauvin ahi. Hijongleh Pathen lungset jalla tunia simtheia ahung um dohjeh in hiche lekha suona dinga sumle paiapang Pu Chuchung elh Koreaaum KSDF member jouse chungah kipathu seijoulou kahin phongu ve. Chule hitobang hahsatna het them jallaaScholarship jengjong it louva hintohdoh Gl Mangkholen chunga jong kipathu kahin phongdoh uve. Achunga hung minchuong ho chunga mihem hinaaimacha kale thuh jou loujeh uvin phamo kasalheh uve. Hijongle Pathen in ijakai ahet a, alunglhai na mite chunga phat theiboh ji ahito kilhonin hitobang nathilpha bol hou hi alem hilou va, Pathen in ajatjaaphatthei naboh diu kinem in kabolthei penu Pathen hengah ka hintao peh jing uve. Adalhah atoh khompi ho, Kuki Studentsâ&#x20AC;&#x2122; Democratic Front(KSDF)
Kimboi min banaaPhungmin kisut louna ajeh hetsah Tuchunga katoh khompiu Miss. Vahneikim@ Kimboi in ginchat loubehaeida lhahjeh uvin atoh khompi kei hojong lungleng vaitah in hinkho kamang uvin ahi. Amahi pathen he, migunchu, mi hangsan, thilphabol chimtih neilou, nung juipha ahi tokilhona lamkaipha ahunghi ding kineppi umtah ahijehajong ka pohnat dih u ahi. Alangkhat in ama hi insungkeo hilouva polama loile gol hao nungah melhoi tah ahi jeh injong hiche nia hunglha mipi jouse chun insung mite lainat vet lel jall in alhilong louva kile aum lou keu hi lou vin ama akona hung kikholdohathil pha bolna lama pan hin la jong het theia aum akimun ahi. Hiche chun ama hin athi jengin jong jatle nam adom sange ti aki mudoh in ahi. Chuleh ama hi KSDFapanla dinga kitem ahito kilhon in kei honjong keiho kivai pohna dungjui in ija kai kana bol nau chugah amin bana phungmin akisut loujeh in tahsa lam dolla insung mi hon nommo asauvin ahi. Hijong leh amah on KSDF chena lhongpi chunga kihou limna kanei uto kilhonin hetthem na ahin nei uva, imajouse apha lama kahin chaithei jeh uvin jong Pathen lungset kachan jingo akilang in ahi. Ajehchu Custom nahsah mona le Kimboi hina selmangding kiti hilouvin, hitobanga Kuki tesunga Phungthu hi ahina banga chepilouva, kikhen tel najohachepiding mijeng ahitahjehahichehi kichepi ahi. Ajehchu Phunggui hi Kuki Custom ahia chule hichechu ahina banga chepiding itiu leh tunia kuki Society sungahi koima pampaiding umlou Khula kon Pu songthu leh Chung khopia Pu. Vanthang chilhah jeng ahi to kilhona kikhen telna um louva kingailu tahahinkho imandiu doltah ahi. Ahin tunia kukite Mandan hi akivet leh kipumkkhat na hilouvin kipumkhatna suhchat vainading johamangcha jeng ahitah jehahichehi kichepi lou ahi. Amongin jong Phung le Chang hi dolla khatle khat kihet todinghi thilpha ahito kilhonin KSDF in Phung le chang inei uhi namdang to ikibah lou nao Identity khat ahi tin, akipom jingin ahi. Ahin, imin bana Phungmin jih vang hi Custom hilouvin kihoi thosah jalla hung kisun pan ahi tin aki pomin ahi. Ajehchu min bana Phungmin jih hi Kuki Custom ahilou jehagoullui laia ipu ipa teu vin jong ana jih khahlou u ahi. Ama vang ipu ipa teu vin, amin banu va phungmin suttah sanginaPhungmin ujong an moh phah jipouvi. Alou thei louva asei diu jong leh Pu.Kipgen, Pu. Haokip, Pu.Lhungdim te etc, tia amin phah kiu ahi. Ajeh chu phungmin hi Pumin ahito
kilhona hiche Pumin chu kimoh seisei ngailou ahi. Tekah nan Pu. Chengjapao chu koinam Doungala helouva. Aisanpa tia ahet banguva Pu. Pache jong chu Doungula seilouva Chah satpa tia anaseijiu ahi. Hiche chu akivet leh min bana Phungmin jihhi Custom het thoding sut louding johy ahi. Hitia ahinabanga imanchah theiloujeh uva jong tunia Kuki tehi Phung le chang hin kipum khat na atohkhah ahi. Chuleh iphung min sut teitei ding hi angaina (custom) ahileh British te khanga patna amin asut jouseu va Phung minto asut thadiu doltah ahi. Ahin koiman amin ban ah phungmin ana sunpoi. Hiceh thuhi akisei tengleh lung lentah dana aphalama manding iti vnag uvin, practical in koiman apodoh poi. Chuleh kuki Societyaijakai khantouna dingjouse hiche in akha jehaKSDF in hitoang Ideology hin kichepi ahi. Anoiah chollha Magazine in Kimboi phungmin ahin sonao chungah kale donbut nao copy jong mipi hetdin kahin jaosah uve. Jaum tah Chollha Editor pu leh atoh khompi ho, Lha masaakanao nu Miss Vahneikim (Kimboi) umlou thu alekha hung kisochu kamu vin kaki pahlheh uve. Ahin, KSDF hin minbana phung min sut hi kachepi lou u ahi. Hitobang Idwology kachepi nau ajeh jong chu Kuki society hi aki vetle Phung hi ahinabanga chepi louva kihoi tho sah nading le loitum semna dingbepaiman chah u akimujeh ahi. Kuki Custom kidem ahipon, Custom joh ahinabanga ichepi loujeh uva hitobang ideology hi kiche pi ahi. Kuki Society hi veleu hen Tahsalam hihen Lhagaolam hijongle hiche Phung(Custom)hi ahina banga imanchah theilou jeh uva inamsung uva kingai lutna sanga ki boinajoh ineiu hi koi jousen ihecheh uvin ahi. Hitobanga nam ngailut sanga phung ngailut nan vai ahop jehaKSDF apanla jouse thihen, pachanna neijongle amin banna aphung min kijih louding ahi. Nahin sut uahi tah jongle adihpa “Lhungdim” beh hin ti leuchun phat jepding ahi. Tua ahilou khat “Haopip” tia nahin sut u hiainsung miten nomo asahdiu kageldoh uvin kaki phalam lheh uve. Hijeh chun hiche hi akit lhaaneihin sopeh diuvin ka hung tao uve. Chollha member jouse nabon Chauvin Pathen in phatthei naboh u hen lang, Chollha Magazine hingsot jing ta hen. KSDF _Information@public.usa.com
To, The Editor, Sumkawn Daily News paper, New Lambulane, Imphal, Manipur. Dear, Jat le namadinga kinep pi umtah Miss Kimcha, Achesa phatakatoh khompiu Miss. Kimboi in eidalhah thu u Sumkawnaneihin sopeh jeh uvin, KSDF pumpi thakhel in kakipa nau kahin phong doh e. Miss Kimboi(Vahneikim)in eidalhah thu u Chollha Magazine in jong ahin son, kasim u leh Miss. Kimboi@ Vahneikim(Haokip) tia ahinso jeh uvin phamo kasalheh uve. Amahi PU LHUNGDIM tejoh ahi. Hijongleh KSDF hin hi tobanga min bana phungmin sut hi aki chepi loujehaaphungmin kana sutlou u
ahi. Amatah injong min bana Phung minsut hi ana deilou ahi. Hijehchun achunga Chol lha te koma ka hinsei bang uva Sumkawnajong nei hin sopeh diuvin kahung tau uve. Sumkawn hingsot hen Pa pathen in phatthei naboh jing tau hen. Central Committee Kuki Students’ Democratic Front(KSDF)
ဗန်းမော်တင်ေအာငရ့်ဲ နငှ်းဆနီတပငွ့် ရေဲဘာေ် ကျာသ်န်း ကွယလ်နွသ်ူ မျုိးချစ် စာဆေို တြာ်ကီး ဆရာဗန်းမောတ်င်ေအာငက်“ လတူစ်ေယာ ကရ့်ဲတနဖ်ိးုကို သေ့ူ ခတသ်မငိုး ပေးတာဝနက်ို ဘယ်ေလာ က်ေကျ ပ နွခ်သ့ဲ လဆဲတို့ဲ ပေတနံတ့ဲိုင်းရမယ”် လဆ့ို ပိုါတယ။် ဒစီကားကို ဆရာသေအမ့ံူးမူး အချနိ် မှာသသ့ူားကို နောကဆ်ုံးမှာကြားခတ့ဲ့ဲ စကားတစခ်ြုဖစပ်ါတယ။် တကယ်ေတာ ဆ့ရာရဲ့ ဒမှီာကြားခတ့ဲ စ့ဲ ကားဟာ သရ့ူ့ဲ သားတစဦ်းထကဲို ရညရ်ယွတ်ာ မ ဟတုပ်ဲ ခငဗ်ျားတ၊ို့ ကျွန်ေတာ တ့်ို သတ့ူ ဆ့ို တိုေဲ့ ခတအ်သီးသီး ပေါ်ထကွေ်နတဲ့ လငူယ် မောငမ်ယမ်ျုိးချစမ်ျား အားလုးံအတကွ် အမှာစကားတစခ်ြုဖစပ်ါတယ။် (၆၊ ၈၊ ၂၀၀၄)နေမ့ှာ အမတ်ှမ ထ င်သ ဘာဝလောက မ ခိင်ြကီးရဲ့ရငွခ်ငွမ်ှာ ခဝို င်ေရာကရ်သှွိားတရ့ဲေဲ ဘ်ာမ ကင ဘ်ွုိငဟ်ာ အ ထကပ်ါဆရာဗန်းမောတ်င်ေအာင ရ့်ဲ အမှာစကားနငှအ့် ညီ နေထငို က်ျငြ့်ကသွာံးခတ့ဲ့ဲ မျိုးဆကသ်စလ်ငူယ် တစ ဦ်း ဖြ စ တ်ယလ့်ို ကျနောဆ်ချိုငပ်ါတယ။် တကယ်ေတာ့ရေဲ ဘာကင်းဘွုိငမ်ှာ မျုိးဆကသ်စ်များအတယုစူရာကောင်းတဲ့ တခြားအရညအ်ချင်းတေလွည်းရပှိါသေးတယ။် အဒဲါတေထွကဲအရေးအကြီးကတော့ တောလ်ှ န်ေရးအပေါ်မှာ နကန်ကန်နဲ ယြုံကညသ်ကဝ်င်ြ မုတန်ထှာံးခြင်း(Devotation)ဖြစပ်ါတယ။် ဒလီယိုြုံကည် သကဝ်ငမ်ှေုကြာင်လ့ည်းပဲ အချနိေ်လးစားမ၊ှု တာ ဝ န သ်တိတ်ြခင်းနငှ့် တာဝန်ေကျပနြွ်ခင်းတေပွါ တပါတည်း ရှေိ နပါတယ။် အချနိန်တ့ဲာဝနက်ေို လးစားခြင်းဆတိုာဟာ လတူစ်ေယာ ကက်ို တနဘ်ိးုဖြတ်ရာမှာ အရေးအကြီးဆုးံဖြစပ်ါတယ။် ဒအီရညအ်သေွးများကို ပငို ဆ်ငို ထ်ားတဲ့ ရေဲဘာ က်င်းဘွုိငန့်ဲ ကျွန်ေတာJ် AC မှာလကတ်ွေဲ ဆာင်ရကွခ်ငွရ့် ခပ့ဲါတယ၊် J A C ဆတိုာအနိယ္ဒိ နငို င်ံ နယူးဒေလေီရာက် မြနမ်ာဒ့မီကို ရေစအီငအ်ားစမျုားကလငူယ(် ၂၀)ကျောန့်ဲ ဖစ့ွဲ ည်းထားတဲ့ ပူးပေါင်းဆော င ရ်ကွေ်ရးေ ကာ မ်တတီစခ်ြုဖစပ်ါတယ။် သက္ကရာဇ(် ၂၀၀၁-၂၀၀၂)ကာလများမှာ ဆောငရ်ကွခ်တ့ဲနဲ့ ငို င်ေံရးလပှုရ်ှားမှုတေကွJို ACဦးစီးအကောငအ်ထညေ် ဖာခ်တ့ဲာဖြစ်ပါတယ။် အဒဲလီလို ကတ်ွဲလပုက်ငိုကြယင်းနပ့ဲဲရေဲဘက်င်းဘွုိငဟ်ာစ နံမနူာ ကောင်းများကို လေလေ့ာ၊ဆည်းပူး၊ကျငြ့်က၊ံနေထငို တ်တတ်၊ဲ့နိးုကြားတက်ြကြွပီး လငူယပ်သီတဲ့ လငူယတ်စ်ေယာ ကအ်ဖြစ် တြွေ့မငလ်ာရပါတယ။် ဒါေ့ကြာင့် လပှုရ်ှားမှေုတကွေို ဖာေ်ဆာ င ရ်ာမှာ ဦးဆောင်ေဆြာ်သသတူစဦ်းအနေနဲ့ အခြားကစိရ္စ ပ် များမှာသာ စိုးရိမ်ေကြာငက့်ျဖြစရ်ပေမယ့် ရေဲဘာ က်ငဘ်ွုိင် တာဝနခ်ထာံးတဲ့ အရေးကစိမ္ဈားမှာတော့ စတိခ်ျယြုံကည် ဖြစရ်ပါတယ။် လေူတမွှာတေရ့ွ ခတဲ့ တစပ်ါးသတူစဦ်းရဲ့ စတိခ်ျယြုံကည်ြခင်းခရံတဲ့ အရညအ်သေွးတစခ်ြုဖစပ်ါတယ။် လအ့ူ ဖအ့ွဲ စည်းတငိုးမှာ လငူယမ်ျားရှေိ နပါတယ။် လငူယ်ေတွ ဟာ သကဆ်ငို ရ်ာ လအ့ူ ဖအ့ွဲ စည်းရဲ့အဓကိမောင်းနင် အား(Driven-force)ဖြစပ်ါတယ။်ရိးုသားနိးုကြားတက်ြကြွပီး တာဝနသ်တိတတ့်ဲ လငူယမ်ျားရတှိ့ဲ လအ့ူ ဖအွဲ စည်းရဲ့ အနာ ဂါတဟ်ာမြငမ့်ားလငပ်ငွေ့် နပါတယ။် ဒလီလို ငူယ်ေတကွပဲသတူတ့ို ငိုးပြည၊်သတူလ့ို မျူုိးတေရွဲ့ အနာဂါတ်ေကာင်းမနွတ်ိးု တကဖ့်ို အများဆုးံစနွလ့် တွအ်နှ စန်ာခခြံဲ့ကတာ သမငိုးသက်ေသဖြစပ်ါတယ။် ဒလီလို ငူယ်ေတွ စ နွလ့် တွအ်နစှန်ာခရံတဲ့ စတိ် နမ့ျဲုိးချစစ်တိဓ်ါ တ်ေတွ တိးုပွားဖို့သရူေဲကာင်းတေဟွာ ဇာနည်ေတရွဲ့ တကို ပ်ဝွဲ ငစ်တိဓ်ါတ်ေတွ ကစ နံမနူာယြူကရပါ တယ။် “သရူေဲကာင်းမရတှိ့ဲ တငိုးပြညထ်က် သရူေဲကာင်းလအို ပ်ေနတဲ့ တငိုးပြညရ့်ဲအခြေအနေဟာ ပြိုပီးဝမ်းနည်းစရာကောင်း ပါတ ယ်” ဆ တို စ့ဲ ကားရပှိါတယ်။ ကျွန်ေတာတ်တ့ို ငိုးပြညဟ်ာ ရေဲဘာကင်းဘွုိငတ်လ့ိုို တကို ပ်ွဲဝငရ်င်း ရေဝေးမြေဝေးမှာကျ ဆုးံခြဲ့ကတဲ့ သရူေဲကာင်းတွေအသကစ်နွ့် တကို ပ်ဝွဲ ငသ်ွားကြတဲ့ အာဇာနည်ေတဟွာ အမြောကအ်များမေွးထတုေ်ပးခပ့ဲါတယ။်
ဒါပေမသ့ဲ ရူေဲကာင်းတေ၊ွ အအာဇာနည်ေတွ လအို ပ်ေနဆြဲဖစပ်ါတယ။် ဒလီအို နာဂါတ် သရူေဲကာင်းတေဟွာ
အာဇာနည်ေလာင်းလျှာတွေ အတကွ် ရေဲဘာ က်င်းဘွုိငရ်ဲ့စွနလ့် တွအ်နစှန်ာခံ တကို ပ်ဝွဲ ငတ့်ဲ စတိဓ်ါ တန်ရ့ဲ ပတ်ညမ်ဟှုာ စနံမနူာကောင်းတစခ်အုဖြ စ တ်ညရ်ှေိ နပါ လမိမ့် ည။် “ကျဆုးံလေပြီးသော ရေဲဘာ် ကင်းဘွုိငအ်ား ဦးညတွဂ်ဏ်ြပုလျှက”။်
ရေဲဘာေ် ကျာသ်န်း ဆြော်သသူ ပူးပေါင်းဆောငရ်ကွေ်ရးကောမ်တီ မြနမ်ာဒ့မီကို ရေစီ အငအ်ားစမျုား အန္ဒိယ။
KIM BOI UMLOU LUNG HEM JALLA LA KIBOL HO Hichela kisem hoi hi KSDF in 2003-2004 kuma ahin chepi Bible chang (Lamentation Chapter 5:1-5,8,21 hoa base kibol ahi.)
APA (Jamkhotil)LAABOL 1. Miven yingyin thong lhung ta
3. Seng sung ma yo nang kalhah
Keiven jingjing hoiya
lou Hinkal lunga manglou dinge
Vaiyang thamdan taimo;
Keilai gil lah;
2. Iti kase lung hei mo Son ngai lung ching vei gam Kaven ying ying seng sung in Jonang kalhah lou;
(2)APU (Onsho) LAA BOL 1. Son ngai ying yin son nga yingyi
5. Lung tup mol kho solou laija
Thoung lhungding hamtin gal la
Lhangphai thi leh gui khaochaaA
La mang kadot dot’e;
lhakih tai nati mo;-
2. Ka dotdotamel mu lou Doujou nang ngem buhtol Jouyam don lai lha;3. Iti ka ham jang hiaSon ngai ying yin kol phai Gamleiatham den taimo;4. Tham thei pon te, thanthei pote Chung pathen in hin thouvo Koma munthong hung hen;-
6. Ngai lha kih tai ati mo Son ngai lainu thong lhung Louding hitam mo;7. Napu kei si lung lai ah Ka ngaiye Kangai ye son ngai Na souh long;8. Napu kei si lung lai’a Ka it’e Son ngai napal lai
APU (Onsho)LAA BOL 1. Theilou ham mo mang gamma. Pallai Tolba nalou em. Hom tho toi. Hekim
3. Mang gamlei komin lotan te. Nang nga nani nu ngai kho jangto louva.
2. Hom thotol, HEKIM, Nahenga thim thuson Mang gamlei komin lotan te.
4. Sen angkoibon kile louva toidam Lhakit gam vangla lojang thang ngai mo
APU PAKANG LABOL 1
Lha kih numel mulouva Lhang kho phai thilan jouseâ&#x20AC;&#x2122;a Son ngai tongso kajah jing ding
2 Lung tup moul kho solouva Nitin Pusei laigilah dong nemlotai:3 Pusei dongin nem jong leng Ase lungtup Chung Pathenin moulso sah in.4Jing Jin thong lhung louva son Akou dingin Jang huiva khat solute sunga lung nomchan
bola;5 Jang hui va khat sol ute Phol va jing jin bon
7. Lengdinga kabol hi Lhang huithi kason koma ga lel tan 8. Pu Sei selung kinepna Kimnu naso mai ngui heu in 9. Ngui heu heu kason ngai Jatam thinthu hin lelinmang kam ma; 10. Kason ngainu lhangchunga Ai vanlam tanga kaitai Delhi tolakhun 11. Delhi tol joh anom jo ngainu, Kachun le Jo ngai seng
leng, jam kaita, Bongpi on chunga6Napu lai gila kason ngai;- Vangkhoa lai lol tol lengdin kabol e.
A NA E LAI GIL AH ( APAN ALA CHOINA) Nam loupe vai loukon kaven KIMBOI
miven lungdei la ahung thonglhung tan,
Lom hung vailhung dingin,
Keiven lungdei hoija va jangtham nahi tam?
Ka galdot jing uve khomol ah,
Kngah jing uve na insung miten,
Na insung miten.
Solang ban nadingin Lompi vai loukon,
Kol ninou hungsoh em silsel
Hung thong lhung loi jin.
A ima tihaIhum dingin kagel theipoi. Anaelaigila KAVEN lai tan kei lungdei KIMBOI. Ana anai kalai gil ah, KAVEN lungching, Veigam thonglhung lou, KAVEN Lungdei KIMBOI. NB:-:- Kacha amasa pen Kimboi in ei dalhah pohnat jall a, hiche la hi ka hin bol ahin, labol them kahi lou jeh in ka lapao Mandan nei hethem diuvin ka hung tao ve.
Biography of kimboi
she is the first lady who fulfil the KSDF motto;